Myanmar Singer, Ye Lay Dance Like Mr.Bean at Universal Studio in Singapore | Myanmar Celebrity Gossip & News
Myanmar Singer, Ye Lay Dance Like Mr.Bean at Universal Studio in Singapore
စင်ကာပူ Universal Studio မှာ Mr.Bean ပုံစံကပြပြီး မြန်မာ့သွေးကိုပြခဲ့တဲ့ ရဲလေး
Video Sender Comment:
Universal studio မှာ Underground ကတဲ့ Show ရှိတယ် သူတို့ကပြီးရင်ပရိသက်ထဲက လူတွေလဲ ခေါ်ပြီးက ကြတယ်။ အဲဒီရှိုးမှာ Any Volunteers ဆိုပြီးခေါ်တယ် Any Philippine? Any Vietnam? ဆိုပြီးနံမည်တွေ တတ်ပြီးခေါ်တာ Any မြန်မာဆိုပြီး မခေါ်လို့ဆိုပြီး အဆိုတော် ရဲလေး က သူ့မှာပါလာတဲ့ Mr Bean မျက်နှာဖုံးနဲ့ I am from Myanmar ဆိုပြီး Mr Bean လို ဝင်ကသွားလိုက်တာ အားလုံးတအံ့တဩပါပဲ ထူးထူးခြားခြားတွေ့ရတဲ့ မြန်မာတွေရဲ့ မြန်မာ့စိတ်ဓာတ်လေးပါ။ ကျနော်လဲ ရဲလေးရဲ့ Rap Songs တွေကို သဘောကျတာထက် သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပိုပြီး သဘောကျလေးစားသွားပါတယ်။
nanzinMarch 13, 2011 at 1:07 PMGo...Ye Lay...Go... Thumb-Up... !!! :)ReplyDeletekittyMarch 13, 2011 at 5:28 PMha kyte twarbkyar koko yelayReplyDeletetharMarch 13, 2011 at 6:11 PMကောင်းပါတယ်ReplyDeletesuMarch 13, 2011 at 8:22 PMStreet boy အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ချင်ရင်တို့ ဆီမှာစာရင်းသွင်းလို့ ရပြီနော်ReplyDeleteMayMarch 13, 2011 at 9:41 PMဒီလိုရဲရဲဝင်.၀င်.ရှိတာ ကြိုက်တယ် ဒီUS ကမြန်မာတွေကတော.မြန်မာလို.ပြောရမှာရှက်ကျတယ်။ အန်ချင်စရာကြီးနော်။ ကိုယ်ဘာလူမျိုးပဲ ဖြစ်ဖြစ်မြန်မာကလာရင် I am from Burma OR I am from myanmar လို.ရင်ကော.ပြီးပြောနိုင်ပါစေ။ THX :)ReplyDeletekowintMarch 13, 2011 at 10:25 PMMyanmar လို့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပြောရဲပြီး ဒီလို performance မျိုး လုပ်ပြခဲ့ ရဲလေးကို သဘောကျတယ်ဗျာ. အရင်ကတော့ ရဲလေးကို သာမာန်လောက်ပဲ အားပေးတာပါ... Myanmar ကို Myanmar လို့ မပြောရဲတဲ့သူတွေကတော့ တော်တော်ကို ရှက်စရာကောင်းပြီး အောက်တန်းကျလွန်းပါတယ်။ReplyDeletesuMarch 13, 2011 at 10:46 PMသြော် ခက်ပါ့ညီမလေးရယ်ပြောလို့ ဖြစ်မလား100 မှာ 99ယောက် မှမ သိကြတား)ရှေ့ ကလု တွေမှမကောင်းခဲ့တာfrom Myanmar လို့ ပြော ရင် ဖြေရှင်းပြရလွန်းလို့ မောနေReplyDeleteFBA357March 13, 2011 at 10:51 PMI am Burmese and I am from Burma ( lol jk jk ) some ethnic group of fakers don't even say they are from Burma .. anyway there arealot of Chin people in my school , when other students ask them where are they coming from or what are they ... they said fucking Chin but not Burmese or Burma .. lol that assholes forget that what were they when in Burma ( lol i think they won't talk shit against our Burmese race if they were in Burma , but now they are in foreign countries and having some goodies which they can never have in their life time or which they have never had LMAO !! ) and they forget there's no official Chin country or language usage in Burma too lol .. haha at least they tried lls :P lol i just want to say this to some adorable chin assholes :P .. never forget where you coming from and what you were .. never forget your past and remember your fucking poor faces in starving and poverty do not try to hide from it .. don't try to go against our Burmese race .. we are stronger and we are original !! P.S .. they fucking hate me !! yo now i talk shit so what ? lmao ( don't get too excited , i am just kidding lol ) lls .. ... i am not try to bearacist !! i respect to all the ethnicity groups in Burma .. but never try to overwhelm our Bama race or go against us .. you guys were staying under our feet and will be forever !! ... lol as i said do not get too excited .. i am serious this time !! lol :DReplyDeletethuMarch 13, 2011 at 11:01 PMI really proud of u! This is really Myanmar!!ReplyDeletepaiMarch 14, 2011 at 12:06 AMYou really proud to beaMyanmar? What are youaproud of? Bcozz they made ငါးပိ? Bcozz they kill their people? Bcozz they kill their monks?... I have many Chin people in my school as well but I never heard of them saying i am NOT from Myanmar. What they said is 'I am Chin, from Myanmar.' And thats true. They are Chin. Eventhough they are from Myanmar doesn`t mean that they are burmese. Some of them couldn`t understand the burmese so wat is the point of saying i am burmese when they actually are not? I hope u understand them by reading this. If u still not understand them, then u areareally asshole.What i want u to know is that the Chin state wasacountry till signing the ပင်လုံစာချုပ်. They ruled/govern themselves. Have some knowledge before writing suchathing. And watch your mouth.ReplyDeletesuMarch 14, 2011 at 12:19 AM@paiဟုတ်တယ်ကွဲ့ပင်လုံစာချုပ်အတိုင်းဖြစ်ရမှာလေအခုတော့ bull shit အလုပ်ခံရတယ်လူတိုင်းသိပါတယ်မသိချင်ယောင်ဆောင်နေကြတော့လဲအခက်သားReplyDeleteMayMarch 14, 2011 at 12:54 AMဟုတ်ကဲ. မမဆုရေ မမပြောသလိုရှေ.ကလူတွေမကောင်းလို.ဆိုတာနဲ.တော.ပိတ်မပြောလိုက်ပါနဲ.နော်။ ရှေ.ကလူတွေမကောင်းတိုင်းတာ ကိုယ်မကောင်းရဘူးဆို ကိုယ်.နိုင်ငံကိုလူမသိတထက်မသိပိုဖြစ်မှာပေါ.။ မမကြည်.ရတာလည်းUS ကပဲထင်တယ်။ ညီမခုနေတဲ. state မှာတော.လေမြန်မာတွေများ တရုတ်လိုပြောတဲ.လူကပြော Egnlish လိုပြောတဲ.လူကပြောနဲ.။ ဒါတွေကအပြင်မှာထားလိုက်ပါ။ မြန်မာပွဲလာပြီး English လိုလာပြောတာကော ကောင်းလား။ မမရယ်လေနဲ.ဖြေရှင်းတာပဲ ဘာနှမြောစရာရှိလဲ။ ပိုက်ဆံပေးလိုက်ရတဲ.အရာလည်းမဟုတ်။ ကိုယ်.နိုင်ငံကိုတကယ်ချစ်ရင် ကိုယ်ဘယ်ကလာလည်းပြောရဲရမှာပေါ.နော် ဟုတ်လားမမ ကိုယ်ကဒေါ်လာတွေစားပြီးမှ စိတ်ဓာတ်တွေပြောင်းသွားတယ်ဆိုရင်တော. ရီစရာကြီးဖြစ်နေမှာပေါ. ညီမလေးစကားအမှားပါရင်ခွင်.လွှတ်နော်မမ မမကညီမလေးထက် Senior ကျတော.ပိုနားလည်မှာပေါ.နော် :)ReplyDeleteThiriMarch 14, 2011 at 1:31 AMye lay..good performanceReplyDeletelwinmarMarch 14, 2011 at 2:43 AMရဲလေးရေ အမြဲအားပေးမယ်နော်ReplyDeletesuMarch 14, 2011 at 3:20 AMအေးကွယ်အမ လဲ နားလည် ပါ တယ်ညီမလေးပြောတဲ့အပိုင်းကကြည့်ရင်လဲ မှန်ပါတယ်ReplyDeleteChoMarch 14, 2011 at 3:55 AMFor FBA357,We are chin from Burma, not Bama from Burma. Do you think that you are special one between Chin and Bama. You really are fucking guy. Go to History. We Chin are poor because of you Buma, We chin are uneducated because of you Buma. We Chin go to other country from the place where we occupied, because of you Bama.If you are in front of me now, I will really kill you.123chinReplyDeleteလန်းတယ်နော်March 14, 2011 at 4:03 AMအသားထဲက လောက်ထွက်တယ်လို့ပဲ ပြောရမလားပဲ...မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ပြီး ဘာကြီးဖြစ်နေနေ မြန်မာကွလို့ ကြွေးကြော်တာမှ မြန်မာနိုင်ငံသားပီသတာ ဘယ်နိုင်ငံသားကမှ ငါ့နိုင်ငံမကောင်းဘူးမပြောဘူး သောက်ကျင့်မကောင်းတဲ့ မျိုးမစစ်ချင်တဲ့ မြန်မာတစ်ချို့ပဲ အဲလိုပြောတယ်...ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေ သိပ်မပြောနဲ့ဗျာReplyDeleteFBA357March 14, 2011 at 4:40 AM@pai .. wash your mouth with acid first .. if there arealot of Burmese people around their hood , they be acting good ..but if not then they will do shit ..Chin people from my school never say they are Burmese , they only say Chin .. Burmese mean all the people who live in Burma .. Chin doesn't mean it at all .. just think .. what they suppose to say .. Burmese or Chin ? ..ReplyDeletepaiMarch 14, 2011 at 4:45 AMနင်ပဲ ကြွေးကြော်၊ “ငါ မြန်မာ ဟေ့၊ ကိုယ့် လူမျိုးကို အပြစ်မရှိ သတ်တယ်၊ ဘုန်းကြီး တွေကို သတ်တယ်” လို့ ။ ငါ့နိုင်ငံ(မြန်မာ) မကောင်းဘူး လို့ပြောစရာကို မလိုတာ။ မြန်မာ မကောင်းဘူး ဆိုတာ တိုင်းသိ ပြည်သိ ပဲ။ အဲ မြန်မာ မကောင်းကြောင်း မသိသေးတဲ့ သူရှိရင်တော့ အဲဒါ နင့်လိုပဲ စာမဖတ် တဲ့သူ ဖြစ်မှာ။ နိုင်ငံသား ပီသ တယ်ဆိုတာ ဘာ၊ မျိုးချစ်စိတ် ဆိုတာ ဘာ သိအောင် လေ့လာထား ဦး၊ ငါ မြန်မာ ဟေ့ဆိုရုံ နဲ့မျိုးချစ်စိတ် ရှိတာ၊ နိုင်ငံသား ပီသ တာ မဟုတ်ဘူး၊၊ReplyDeleteFBA357March 14, 2011 at 4:46 AM@Pai .. said .. You really proud to beaMyanmar? What are youaproud of? Bcozz they made ငါးပိ? Bcozz they kill their people? Bcozz they kill their monks?... is that what you said ? .. lol seem like u have no nationalism .. because of your kind of assholes .. our country left behind in the world ..ReplyDeleteFBA357March 14, 2011 at 4:51 AM@Pai .. wtf .. one group of stupid people doing shit doesn't mean we all have to deal with that shit !!ReplyDeleteFBA357March 14, 2011 at 4:53 AM@Pai said .. နိုင်ငံသား ပီသ တယ်ဆိုတာ ဘာ၊ မျိုးချစ်စိတ် ဆိုတာ ဘာ သိအောင် လေ့လာထား ဦ .. yea u tell me what mean Nationalism is .. ( haha for u it might be lick the ass of chin people .. LMAO :P )ReplyDeletepaiMarch 14, 2011 at 4:54 AM@FBA 357,Of course, CHIN!!!!If you know the history of burma even justalittle bit you will understand it but with ur knowledge still,i dont think u`ll get it.ReplyDeleteFBA357March 14, 2011 at 5:12 AM@Pai ..theres no history for Chin people in our Bama history .. they live far from people .. they are fucking wild .. they have no knowledge or educatianthats why when the Christian people came in for missionary , they tried to go first with Chin people .. because wild people know nth .. and easy to handle for missions and spread out Christianity .. and the result is most of the Chin people are Christian nowaday .. lol yea btw .. Can we write in Chin .. ? LMAO .. haha Hell No asshole !! if Chin wasacountry and ruled by their government why not they even have official language ? and why they used english alphabets to write in Chin .. come on .. don't fuck with me .. when i fuck u back .. it would be harder and you wont be able to handle .. lls.. :PReplyDeleteFBA357March 14, 2011 at 5:15 AMi didnt ask you about what you are .. lol btw .. Chin is not for nationality either .. they are just one part of ethnic group .. u dont even know what mean the Nationalism in english word then how come you talk shit about it .. google it dumb dumb ..ReplyDeleteChoMarch 14, 2011 at 5:41 AM@FBA357 ha ha ha, ha ha ha.............this word is the word you worth.ReplyDeletepaiMarch 14, 2011 at 5:47 AM@FBA 357You said...'wtf .. one group of stupid people doing shit doesn't mean we all have to deal with that shit !!' “ငါးပုတ် တစ်ကောင် ကြောင့် တစ်လှေ လုံးပုတ်” တဲ့၊ မသိသေးရင် မှတ်ထား။Anyway, u try ur best25me back which is good. People have all different ideas/opinions. I cant say ur thinking is wrong and mine is right. so lets be it.Thanks for all the comment.ReplyDeletethitsaMarch 14, 2011 at 5:55 AMGreat !!!ReplyDeleteKhaing Phyu ThinMarch 14, 2011 at 8:14 AMHello everyone,Myanmar is poor. But I love Myanmar. Although I am not evenareal Myanmar, I still love Myanmar. If I haveachance to come back Myanmar now,I will come back. I believe Myanmar is not for only one,but for all Myanmar. Whatever happens in Myanmar,I still love Myanmar. I am proud of beaMyanmar. We have many natural resources like the world biggest pearl,the world biggest ruby,the world biggest jade and be the world No.10 natural gas exporting country although we cannot apply that natural treasures until now. I do love Myanmar,motherland. Never forget we are Myanmar includes all relative ethnic groups. If you still love Myanmar,we can change Myanmar toabetter one. (Myanmar is not only for Burma but also for all dearest ethnic groups). :)ReplyDeleteKhaing Phyu ThinMarch 14, 2011 at 8:18 AMKo Ye Lay, I am proud of you.ReplyDeletemoeMarch 14, 2011 at 11:34 AMရဲလေးကို လေးစားပါတယ် အမြဲတမ်းအားပေးနေပါ့မယ်....ReplyDeletePaMarch 14, 2011 at 11:52 AM@FBA357... U stupid dumb ass...even cannot differentiate between races and nationality. Read carefully u stupid shit, do u even know that burmese is just one of the races in myanmar? If somebody ask you what's your race and where r u from, of course chin ppl will say their race is chin and they are from chin state, and the same thing going for the other races as well. Whatajoke man, you really proud of being burmese is it?? Your fucking burmese race is justatiny race compared to the rest of the races in myanmar and you're still bursting your ass 'Burmese is the strongest and the original". Yo Dude, u better go back to secondary school and learn some history lessons before all of your shit comments coming out from your fucking ass hole. Got it dude?Oh ya, one more advise for you, You should say proudly to your foreign classmates that burmese are very strong in religion and believe in Buddha. But Don't forget to add in the point that burmese is the only race which killed and tortured the Buddhist monks in the country Myanmar. Have you ever heard from the other races that killing or torturing people who are working for the GOD? So U very proud that your race even can kill your own monks huh??? So what is the point of believing and praying the monks and Buddha!!!! Whatagood morality huh kid!!! Don't cry huh kid....just calm down and know that you r justakid still eating your own shits...You want lollipops?? come and take from me kid... LOLReplyDeleteFBA357March 14, 2011 at 11:57 AM@Pa .. @Cho & @ Pai .. lol anyway .. i believe now ... Chin people can bark louder .. as i said don't too excited cuz its all true .. hahahaReplyDeleteone plus twoMarch 14, 2011 at 12:47 PMဘယ်သူမှားတယ် မှန်တယ် ဆိုတာတော့ မပြောလိုဘူး ။ ပြည်ပမှာ ချင်းစုတ်တွေ လူပါးဝတယ် ဆိုတာတော့ လူတိုင်းသိတယ် ။ မလေးရှားမှာလဲ ဒီကောင်တွေ လိမ်စားနေတာပဲ ။ အမက မောင်ကိုပြန်ယူ ပြည်ပထွက် အသနားခံ တောင်းစား ။ ဗမာတွေများတဲ့နေရာမှာဆို ဒီကောင်တွေ ဝပ်နေတာပဲ ။ ဒီကောင်တွေကြား ဗမာ တစ်ဦးရောက်သွားကြည့် အောက်တန်းစရိုက်တွေနဲ့ ဝေဖန်ပါလှိမ့်မယ် ဖိနှိပ်ပါလှိမ့်မယ် ။ ပြောလိုက်ရင် အရာရာဘုရားသခင်ကျေးဇူး .. သူတို့ချင်းပြည်နယ်စုတ်ပြတ်သတ်နေတာကရော ဘုရားသခင်ကျေးဇူးပဲလား? ပြောမယ်ဆို ပြောစရာတွေအများကြီး ဒါပေမယ့် တောင်ပေါ်က အရိုင်းအစိုင်းကောင်တွေပဲ ဘာဆိုဘာမှ နားလည်နိူင်မှာမှမဟုတ်တာ ။အမိမြေကို ကချင် ကယား ကရင် ချင်း ဗမာ မွန် ရခိုင် ရှမ်း ဆိုတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေအပြင် တခြားမျိုးနွယ်စုတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်း တောင်ထောင်ထားတာမှန်ပါရဲ့ ။ ဒါပေမယ့် နိူင်ငံရဲ့ ဘာသာစကားကဘာလဲ ? မြန်မာစာ .. မြန်မာစကား အဓိကကိုးကွယ်မှု့ ဘာသာကရော ? ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာစကားကသာ မှုရင်းဘာသာစကားဖြစ်ခဲ့လို့တရာဝင် ပြောဆိုသုံးစွဲနေကြတာပေါ့ ။ ဗမာစကားမဟုတ်ဘူးနော် ။ ဗမာ စကား နဲ့ မြန်မာစကားလဲ ဆင်တူသလိုရှိပေမယ့် ကွာခြားမှု့လေးတွေလဲရှိပါသေးတယ် ။ အမိမြေမှာနေထိုင်ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ အားလုံးကိုပေါင်းပြီး မြန်မာလို့ ခေါ်တယ် ။ မြန်မာနိူင်ငံမှာ နေထိုင်သူအားလုံးဟာ မြန်မာလူမျိုး ။ မြန်မာနဲ့ ဗမာ မတူဘူးနော် ဗမာဆိုတာက တိုင်းရင်သားမျိုးနွယ်စုဝင်တစ်ခု .. မြန်မာဆိုတာလူမျိုး ချင်းဆိုတဲ့ လူမျိုးကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာမရှိခဲ့ဖူးဘူး ။ အပေါ်ကလူတွေပြောပါတယ်ဆိုတဲ့ ချင်းပြည်နယ်သမိုင်း မြန်မာ့ရာဇဝင်မှာ ပြန်လှန်ကြည့်မှ စာမျက်နှာ နှစ်မျက်နှာရှိမယ်မထင်ဘူး ။ မြန်မာ့ရာဇဝင်မှာ ချင်းတွေပါဝင်ခဲ့လား ။ မြန်မာနိူင်ငံကို ချင်းတွေ တည်ထောင်ခဲ့ဖူးလား ။ ချင်းဘာသာစကား မြန်မာ့ရာဇဝင်မှာရှိခဲ့ဖူးလား ။ အရိုင်းအစိုင်းကောင်တွေ ဝူးဝူးဝါးဝါး အော်ရင်းကသာ ဘာသာစကားဖြစ်လာတယ် ။ ချင်းဘာသာစကားချ ရေးလို့ရလားမေးချင်တယ် ။ အစဉ်အလာအရ မြန်မာတွေအောက် ကျွန်ခံလာပြီးမှ ထမင်းဝလို့လူပါးဝနေပြီလား မိတ်ဆွေတို့ ရေ ။ http://wikimyanmar.co.cc/wiki/index.php?title=%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%B0%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B8 မကျေနပ်လို့ဆက်လက် အထိနာနေမည်ဆိုပါက ပေးထားသော လင့်ခ်များကို သွားရောက် လေ့လာရန် အကြံပေးလိုပါသည် ။http://wikimyanmar.co.cc/wiki/index.php?title=%E1%80%97%E1%80%99%E1%80%AC ဗမာ နဲ့ ချင်း အကြောင်း လေ့လာလိုက်ပါဦး ။ ဒါပေမယ့် မြန်မာနိူင်ငံမှာ နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ ကျနော်တို့အားလုံးဟာ မြန်မာလူမျိုးဆိုတာကိုတော့ ကျေးဇူးပြုပြီး မမေ့ပါနဲ့ ။ ဗမာ မဟုတ်ပါ ချင်းမဟုတ်ပါ ။ ကျုပ်တို့ ဟာ မြန်မာလူမျိုးပါ ။ReplyDeleteR0seMarch 14, 2011 at 1:12 PMone plus Two ပြောတာကို ထောက်ခံတယ် အားလုံးက တစ်နိုင်ငံတည်းကလာကြတာပါ ...ဘာလို့ အပြင်ရောက်တော့ဒီလိုဖြစ်နေတာလဲ ...ဘယ်သူဘာပြောပြောပါ ကိုယ့်တစ်မြေတည်း တစ်ရေတည်းသောက်လာကြတဲ့ လူအချင်းချင်း ကိုက်ကြတာတော့မကောင်းဘူးရော် ...တစ်ခြားနိုင်ငံသားကလာပြောနေတာမဟုတ်ဘဲ အချင်းချင်းတွေဖြစ်နေတာကြည့်ရာ တစ်မျိုးကြီးပဲ ..အမျိုးကြီးဝါဒတွေ ဘာဝါဒတွေ မစွဲကပ်စေချင်ဘူး အားလုံး တစ်ပြေးညီတည်း စာနာပေးတတ် နားလည်ပေးတတ်ရင် ကောင်းမယ်ရော်......း) Peace !!!!ReplyDeleteMayMarch 14, 2011 at 1:38 PMတခုပြောမယ်နော် ဒါဆိုတို.ဘုန်းကြီးတွေကို သတ်တာကောဘယ်သူတွေလဲ။ နင်တို.ချင်းအစုတ်ပလုတ်တွေကိုခေါ်ပြီး သတ်ခိုင်းခဲ.တာပဲလေ။ နင်တို.ကကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ. ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုပဲလူလို.ထင်ပြီး သူများဘာသာကိုလိုက်သတ်တာကောကောင်းလား။ငါတို.ကခရစ်ယာန်မဟုတ်ပေမဲ. သူများဘာသာကိုမစော်ကားဘူး။ လေးစားတယ်ဟဲ.။ နင်တို.ချင်းမြို.ဆိုတာ ချင်းနိုင်ငံမဟုတ်ဘူး။ တခုပြောမယ်နော်အစိုးရကောင်းတာ မကောင်းတာနဲ. မြန်မာလူမျိုးတွေမကောင်းတာဘာမှကို မဆိုင်တာ။ နင်တို.လို refugees camp မှာစုတ်တီးစုတ်ပြတ်နေပြီး ဒီနိုင်ငံခြားကိုရောက်လာတဲ.ဟာတွေကိုလည်း စောက်အထင်ကိုမကြီးတာ ရှင်းလား။ နင်တို.ကိုခုဆို မြန်မာက အခြားလူမျိုးတွေက လက်လန်နေပြီ။ ရွံလို.။ ငါတို.ဘုရားကဘယ်တော.မှ သူများဘာသာကိုမပုတ်ခတ်ဘူး ။ မစော်ကားဘူး ။ နင်တို.မယုံရင် ဘုန်းကြီးတရားပွဲတွေ လာနားထောင်။ နင်တို.လို sunday တိုင်း ပွဲလုပ်ပြီး သူများဘာသာကိုလိုက်ပုတ်ခတိနေတာမဟုတ်ဘူး ။ရှင်းတယ်နော်။ပြီးတော.ငါတို.ဘာသာထဲဝင်ပါဝင်ပါဆိုပြီးလည်းအတင်းလိုက်မဆွယ်ဘူး ။ယုံကြည်မှဝင် မယုံကြည်မ၀င်နဲ. ဒီလိုပဲ ။လာပြီးတော.အောက်တန်းစားစကားတွေတော.လာလာမပြောနဲ.။ စောက်ရမ်းရွံဖို.ကောင်းတယ်။ReplyDeletesaiMarch 14, 2011 at 2:53 PMokie!! actually its not complicated at all. yes i m shan and i m from myanmar but i m not burmese (hope someone can clearly identify what is myanmar and burmese). and the term Burma is not suppose to use since the gov already change to myanmar. i m happy to say that i m from myanmar but simply i m not burmese which is the race for itself.ReplyDeleteone plus twoMarch 14, 2011 at 2:57 PMမမေ ရေ ..သူတို့ ဘဝကမြန်မာနိူင်ငံမှာတုန်းက ဆိုက်ကားမပြောနဲ့ နွားလည်းတောင်မစီးနိူင်တဲ့ သူတွေက ပြည်ပရောက်မှ ကားအကောင်းစားတွေ စီး .. မသုံးဖူးတာတွေသုံး .. ပြည်တွင်းမှာတုန်းက အငတ်ခံနေရတဲ့ ဘဝတွေကနေ ခုမှ မစားဖူးတာတွေစားနိူင်ပြီး အဆီယစ်နေတော့ လဲ ဘဝမေ့တာမဆန်းပါဘူးဗျာ ။ReplyDeleteone plus twoMarch 14, 2011 at 2:59 PMBurmese ( Myanmar ) ဆိုတာ မြန်မာလူမျိုးပါ ။ တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုပါတယ် ။ Bama ကမှ ဗမာ လူမျိုးပါ ။ ကိုစိုင်းရေ ခင်ဗျားလဲ နားလည်မယ် မျှော်လင့်ပါတယ် ။ReplyDeleteone plus twoMarch 14, 2011 at 3:02 PMကိုစိုင်းရေ ခင်ဗျားက ရှမ်းမို့ဗမာ မဟုတ်ဘူးပြောရင် ငြင်းစရာမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားဟာ မြန်မာလူမျိုး မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ ငြင်းလို့ မရဘူးနော် ။ ခင်ဗျား ကြီးပျင်း နေထိုင်ခဲ့တာ မြန်မာပြည်ပါ ။ရှမ်းပြည်လဲမဟုတ်သလို ဗမာ ပြည်လဲမဟုတ်ပါဘူး ။ မြန်မာ့ မြေပါ ။ReplyDeletechubbycheeksMarch 14, 2011 at 3:31 PMတို့တိုင်းရင်းသားတွေသိပ်စည်းလုံးနေကြပါလား..ရဲလေး Mr.Bean လုပ်တာကိုပေးလိုက်တဲ့ Comment ကနင် စလိုက်တာ တိုင်းရင်းသားတွေ ရန်ဖြစ်တာနဲ့အဆုံးသတ်တယ်။ဘာမှလဲမဆိုင်ဘူးဗျာ နော်..။ကျတော်တို့တွေဘယ်ခေတ် ဘယ်အခါ ကျမှညီညွတ်ကျမှာလဲဗျာ....။ReplyDeletezawMarch 14, 2011 at 3:40 PMone plus two @ may ...thanks for yours comment. For the future , u should write comment like that.ReplyDeleteone plus twoMarch 14, 2011 at 3:43 PMကျနော် လင့်ခ် တွေ ချ ထားခဲ့ပါတယ် ။ http://wikimyanmar.co.cc/wiki/index.php?title=%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8_%E1%80%9C%E1%80%B0%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%B3%E1%80%AD%E1%80%B8 (ရှမ်းလူမျိုးပါ) http://wikimyanmar.co.cc/wiki/index.php?title=%E1%80%97%E1%80%99%E1%80%AC ( ဗမာလူမျိုးပါ)ReplyDeletesnowpyuMarch 14, 2011 at 4:02 PM@ one plus two and mayတကယ့်အရိုင်းအစိုင်းကောင်တွေကချင်းတွေမဟုတ်ဘူး..မင်းတို့တွေ..လူကိုမုန်းရင်လူကိုပဲပြောပါ..သူများကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကိုမစော်ကားပါနဲ့..ဒီလောက်တောင်..နာကျည်းပုံထောက်ရင်..ချင်းတွေရဲ့ခြေဖဝါးအောက်မှာပြားပြားဝပ်နေရပြီထင်တယ်...မစားရရင်လည်းသဲနဲ့တော့မပက်ကြနဲ့လေ..မကောင်းဘူး...ReplyDeleteone plus twoMarch 14, 2011 at 4:23 PMအဟက် ငါ အရှင်းဆုံးပြောမယ် ငါ လူ၊မျိုးကိုမမုန်းဘူး မြန်မာကို မြန်မာလို့ဝန်ခံချင်စိတ်မရှိတဲ့ ချင်းမျိုးနွယ်စုတစ်ခုလုံးကို မုန်းတာ ။ အဟား မင်းတို့ချင်းတွေ မြန်မာ့ သမိုင်းမှာ စစ်ကျွန်တွေပဲ ။ ငါတို့ဘာလို့ ရိုင်းတယ် မပြောခင် မင်းစာဖတ်တတ်ရင် အပေါ်မှာရေးထားတာတွေကို ပြန်ဖတ်လိုက်ပါဦး ။ReplyDeletesnowpyuMarch 14, 2011 at 5:12 PM@ one plus twoဒီမှာ..သမိုင်းဆိုတာကိုထည့်ထည့်မပြောပါနဲ့..မင်းရဲ.အရေးအသားကိုကြည်ပြီး မင်းဘယ်လောက်ပဲသိတယ်ဆိုတာမြင်ပြီးသားပါ..ချင်းတောင်ကနေလာတာမို့လို့ချင်းတောင်ကနေလာလို့ပြောတာ..အမှန်ပဲလေ.ဲလူတိုင်း.သူ.အမြင်နဲ.သူပါ..လွတ်လတ်စွာသဘောထားကွဲလွဲပိုင်ခွှင.်ရှိတယ်.မင်းဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်းအားလုံးဖြစ်ရမယ်လို.ခံယူထားရင်တော့..ဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး..မင်းပင်ပန်းရုံပဲအဖတ်တင်မယ်..ReplyDeletePiconetMarch 14, 2011 at 6:23 PMဗိုလ်ချုပ်က မြန်မာဆိုတာကိုမြန်မာလို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောရဲအောင်အသက်စွန့်ပြီးလုပ်ပေးခဲ့တာပါ.ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဘယ်လောက်ပဲနိမ့်ကျနေပါစေ လက်ရှိစနစ်ကဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေ မြန်မာဟာမြန်မာပါပဲ.ဘယ်လူမျိုးမှခြောက်ပြစ်ကင်းသဲလဲစင်ဆိုတာမရှိပါဘူး. အဲ့ဒီ့အတွက်မြန်မာလို့ပြောရမှာလဲဘာမှအားငယ်ကြောက်ရွံ့နေစရာမရှိဘူး ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ကျေးဇူးကိုသိတတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ပေ့ါလေ. အခြေနေအကြောင်းကြောင်းကြောင့်မပြောထွက်ခဲ့သူတွေကိုလဲအပြစ်မမြင်ပါဘူး ကိုယ့်ခံယူချက်နဲ့ကိုယ်ပဲပေ့ါ.အခုလဲရဲလေးကသူကျွမ်းကျင်တဲ့အနုပညာနဲ့သူဘယ်ကပါဆိုတာသတ္တိရှိရှိပြောပြီးပရိတ်သတ်တွေကိုဖျော်ဖြေသွားတယ်. ဒါပေမဲ့ ဒီကိစ္စနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေအချင်းချင်းရန်ဖြစ်နေကြတယ် အခုလက်ရှိဒီမှာကွန်းမန့်ရေးနေတဲ့လက်တစ်ဆုပ်စာတောင်မစည်းလုံးမှတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုတစ်ယောက်နှစ်ယောက်လောက်ကလုပ်ချင်တိုင်းလုပ်နေတာဘာမှမဆန်းတော့ပါဘူးလေ.ReplyDeleteMayMarch 14, 2011 at 6:52 PMလွတ်လပ်စွာ သဘောထားကွဲပိုင်ခွင်.ရှိတယ်ဆိုကတည်းက နင်စိတ်ဓာတ်တွေဟာ ဘယ်လောက်အောက်တန်းကျတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိတယ်။နင်တို.ဟာတွေရောက်ကာစတွေ.ပါတယ် ဖိနပ်ကွင်းထိုး လွယ်အိပ်အစုတ်ပလုတ်နဲ. အစာရေစာပျက်ကွက်နေတဲ. ရုပ်တွေနဲ. ဒီလိုလူတန်းစားတွေရဲ. ခြေဖ၀ါးအောက်မှာ ပြားပြားဝပ်တယ်ဆိုတာ အိမ်မက်တောင်မမက်ဘူးဘူး။ နင်မျက်စိကောင်းတယ်ဆိုရင် ဘယ်သူကဘယ်သူ.ဘုရားကိုအရင်စော်ကားတာလဲ နင်ဘာသာအရင်ကြည်.။ နင်တို.သိပ်ပြီး ချင်းစစ်ချင်ရင် ချင်း websiteတွေသွားကြည်.လေ။ ဘာလို.မြန်မာ ဆိုဒ်လာကြည်.သေးလဲ။ပြီးတော.ငါတို.ဘုရားကိုသတ်တာကလည်းနင်တို.အမျိုးရုပ်တွေကိုခေါ်ပြီး သတ်ခိုင်းခဲ.တာပဲလေ။ပညာမတတ် အောက်တန်းစားစိတ်ဓာတ်တွေနဲ. ဒီလိုလူမျိုးရေးခွဲခြားတတ်တဲ. နင်တို.တွေတာ လူစိတ်ရှိလား။ဘာလားစဉ်းစားကြည်.ဦး။ အော်ငါကမြန်မာလူမျိုးတော.မဟူတ်ဘူးနော်။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုထဲကပဲ။ ဒါပေမဲ. နင်တို.လိုတောကြိုတောင်ကြား ဇနပုဒ်ကမွေးလာတဲ.လူမဟုတ်တော. အမှားအမှန်ခွဲခြားတတ်တယ်။ငါတို.က မြန်မာပြည်ကလာရင်ဆင်းရဲ ချမ်းသာ အကုန်ချစ်တယ်။ အားလုံးဟာရပ်ဝေးမှာကြီးပဲ။ဒါပေမဲ. နင်တို.လိုစောက်ရေးမပါတဲ.အသိဥာတ်တွေရှိတဲ. ဟာတွေကိုတော.ရွံလွန်းလိူ.။ ခုမှပဲ နင်တို.တွေရောက်လာမှ နိုင်ငံခြားနိုင်ငံတွေလည်း လူအထင်သေးတယ်။ တခုခုဆိုတောကစတိုင်တွေအတိုင်းလာလာချိုးနေလို.။အစကတော.သနားပါတယ်။ ကိုယ်လိုရွယ်သူချင်းတွေပညာမတတ်တော.။ ဒါပေမဲ.ဒီလိုစိတ်ဓာတ်တွေရှိတယ်ဆိုကတည်းက စောက်ဖတ်ကိုမလုပ်တာ။ok?ReplyDeleteKo ZawMarch 14, 2011 at 7:05 PMချင်းမတွေက အလကားလိုးလို့ ရတယ်ဟမွေးလာတဲ့ကလေးက ဘုရားပေးတာပဲလေဟုတ်ဘူးလားဗျာ ဘာတွေပြသနာဖြစ်နေတာလဲ ။ReplyDeletestupidMarch 14, 2011 at 7:10 PMနောင်နှစ်(၅၀) လောက်ဆို ချင်းပြည်ဆိုတာ မြန်မာပြည်မြေပုံထဲမှာ ရှိမှာမဟုတ်တော.ပါဘူး ။ စစ်ကိုင်းတိုင်းထဲကို တ၀က်ထည်.လိုက်ပြီး တ၀က်ကိုတော. ကချင်ပြည်နယ်ကို လက်ဆောင်ပေးလိုက်မှာပါ။ဘာဖြစ်လို.လည်းဆိုတော. ချင်းတွေက USA ကို UNHCR ကပေးတဲ. ငတ်ပြတ်ဆင်းရဲဒုက္ခသည် အနေနဲ. ထွက်သွားကြလို. ကုန်သွားတာပါ။ နောင်ဆို ချင်းလူမျိုးကိုကြည်.ချင်ရင်ကြည်.ရအောင်လို. ဆုန်သင်းပါ သေရင် ဆေးဆိမ်ပြီး ပြသထားမှာပါ (၀တယ်မပြောနဲ. ရန်ကုန်မှာနေလို.ပါ)။ps/ ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းပေးခဲ.တဲ. ဒီချင်းပြည်ဟာ ဒီလောက်ဒုက္ခရောက်ရမှန်း နစ်ပေါင်း(၂၀၀၀)ကျော်မှသိလာလို.ပါ ။ :pReplyDeleteHsaMarch 14, 2011 at 9:07 PM@FBA357 ဆိုတဲ့လူက ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာ..လေသံကို..သိသာပါတယ်။ တခြားethnic တွေကိုတော်တော်နှိမ်ပြောချင်တယ်မဟုတ်လား..ဗမာကကောသူတို့ ethnic ထဲက ethnic တခုပဲဆိုတာက သိပုံမပေါ်ဘူး။...သိသိကြီးနဲ့ လည်းဖုံးပိထားချင်တယ်မဟုတ်လာ။ .ရိုးရိုးလေးပဲကြည့်ပါ....ကြည့်ပါလားမြန်မာမြေပုံထဲမှာ ကချင်ပြည်နယ်.။ချင်းပြည်နယ်..စသည်ဖြင့်..ဒါပေမယ့် ဗမာပြည်နယ်ကျတော့ကော..ဘယ်လဲ..တိုင်းတွေအားလုံးကသိမ်းချင်တယ်မဟုတ်လား...တနိုင်ငံလုံးကိုချုပ်ချင်တယ်မဟုတ်လား..အဲဒါ ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒကွ..ReplyDeleteLeiMarch 14, 2011 at 9:16 PMWOHHH !!!!!! YE LAY ~! REALI THUMBS-UP~!!! LIKE UR PERFORMANCE !! CONGRATS !ReplyDeleteFBA357March 14, 2011 at 9:30 PMHsa .. i know the differences between Bama ( ဗမာ ) and Burmese ( မြန်မာ ) .. i know our nation , Burma is built up with all ethnic groups .. there will not be Burma , if we don't count on other ethnic group .. i respect them all as long as they don't do shitReplyDeleteFBA357March 14, 2011 at 9:33 PMbtw 60% of Burmese population is only Bama .. yea because of Bama you guys can be living in Burma .. i am notaracist .. i just hate Chin people .. ok ?ReplyDeletepureMarch 14, 2011 at 10:24 PMidiots များ ရေးကြီးခွန်ကျယ် ဆွေးနွေးနေကြသည် ဟားဟားReplyDeletesuMarch 14, 2011 at 10:27 PMဟိုအရင်ကချင်းတွေ ရိုးပုံများကွယ်နိုင်ငံခြားပို ပေးမယ်ဆိုပြီးပုဂံကိုပို့ လိုက်တာလေလေဆိပ်မှာယောင်အအနဲ့ လိုက်မေးနေရှာတယ်လေလူကုန်ကူးတွေရဲ့လုပ်ရပ်ပေါ့:)အခုတော့တခြားစီပါပဲချင်းဆိုတာတောင်ဗမာတွေပြာလို့သူတို့ သိကြတာလေဟုတ်တယ်မလားညီမလေး မေ:)ReplyDeleteHsaMarch 14, 2011 at 10:30 PMFBA357 ဆိုတဲ့သူ.. ၆၀%နှုန်းကဗမာတဲ့..ဟုတ်ပါပြီးအဲဒါဘယ်သူသတ်မှတ်တာလဲ။ အရှေ့နာမည်တွေမှာ ..မတို့ ...မောင်..တို့ထည့်ပြီးတော့..တခြားတိုင်းရင်းသားတွေကို.ဗမာလူမျိုးအဖြစ်တခါတည်းပြောင်းလို့ လို့ ..၆၀ % နှုန်းဖြစ်သွားတာပဲ...အမေက..မွန်..အဖေက ဗမာဆိုရင် ဗမာလူမျိုးသာတခါတည်းရေးလိုက်တဲ့စာရင်းတွေပါ..ပြီးတော့ ဗမာမဟုတ်တဲ့..မတူညီတဲ့ ethnic တွေမှာလည်း..ရတဲ့ကလေးကို ဗမာပဲပြောင်းပြီးရေးလိုက်တဲ့ သန်းခေါင်းစရင်းတွေ ပေါလွန်းလို့၆၀% နှုန်းဖြစ်သွားတာ..ဒီနည်းနဲ့ ပဲ ဗမာတွေက တခြားတိုင်းရင်းသားတွေဝါးမျိုးတဲ့နည်းထဲက တနည်းReplyDeletepureMarch 14, 2011 at 10:33 PMတိုင်းပြည်ကစည်းလုံးမှု့ မရှိပါလား တယောက်ဖွရင် အားလုံးလိုက်ပွကြတာပဲတိုင်းပြည်တိုးတက်အောင် ပိုအချိန်ပေးဆွေးနွေးကြပါလား အားနေရင်ပြောပါတယ် ;)ReplyDeleteJuMarch 14, 2011 at 10:45 PMပြည်ပရောက်တဲ့သူတွေသာ မစည်းလုံးတာပါ ပြည်တွင်းမှာအေးဆေးReplyDeleteburmeseguyMarch 14, 2011 at 10:55 PMokay now let me tell to both side if you love Myanmar don't fuck with any body from other country especially with white and black. I saw both bama and chin girls are fucking with white and black guys. Control your blood if you love Myanmar . Men and women can feel naturally forever not need to be animals way.So stop fucking with them if you proud to be Myanmar.ReplyDeleteFBA357March 14, 2011 at 11:15 PM@burmeseguy .. thats true !!ReplyDelete1 +2= 12March 14, 2011 at 11:23 PMJu ပြည်တွင်းမှာ လူပါးမှမဝရဲကြတာပြည်ပမှာ မှ အစာဝလို့ ဘဝမေ့တဲ့ကောင်တွေ ။ Hsa မြန်မာနိူင်ငံကထွက်သွားစမ်းပါဗျာ ကိုယ့်အမျိုးကို မြန်မာလို့ မသတ်မှတ်ရင် ။ ချင်းလူမျိုးစု မရှိလို့မြန်မာနိူင်ငံ မနစ်နာသွားဘူး ။အရင်ကထက်တောင် သာလွန်ဦးမယ် အမျိုးယုတ်တွေ မြန်မာ့မြေ မှာနေ မြန်မာ့မြေမှာ ကြီး .. အမိမြေကို စော်ကား ဘဝမေ့တဲ့ကောင်တွေ ။ReplyDeletepureMarch 14, 2011 at 11:44 PMအဟေးဟေး ချချ လူတွေထိုင်ကြည့်မယ်ReplyDeletechochoMarch 14, 2011 at 11:47 PMဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲ..မြန်မာနဲ ချင်း တစ်ပြည်တယ် နေကြတာလေ..တိုင်ပြည်တစ်ခုထဲကမွှေးဖွားလာကြတာပါ..မြန်မာပြည်က ..ဆန် ကိုစားပြီးမြန်မာပြည်က ..ရေ ကိုသောက်ပြီး လူဖြစ်လာကြတာပါ...ချင်း လူမျိုးကလဲ..ဘာသာရေး နဲဆိုင်တာတွေကို မပြောရဘူးလေ...မြန်မာ ကလဲ လူနဲစု တိုင်းရင်းသားကို ညာတာရမယ်..ကူညီရမယ်...ဘယ်သူက မကောင်းကောင် ကိုယ်က ကောင်းရမယ်...အမေစုက ပြောထားတာရှိတယ်လေ...မတူညီတဲ့ သဘောထားတွေကို ညှိယူပြီးတော့ ..တကယ်စစ်မှန်တဲ့..ညီညွတ်ရေးကို ထူထောင်မယ်..ကျွန်မတို့အနေနဲ့တိုင်းရင်းသား ညီအကို မောင်နမများကို အားလုံးတန်းတူပဲ .သဘောထားပါတယ်..။ ဒါကြောင့် တို့တွေအားလုံး ..ညီညွတ်ရမယ်..........ReplyDeleteJuMarch 14, 2011 at 11:48 PMကလေးတွေရန်ဖြစ်နေတာပါ မချိုချိုReplyDeletesanMarch 15, 2011 at 12:08 AMhal seint nyit sa yar gyi tway...bar ma hote tar ko nyinn nay kya tal....dar kyauk le ngar do country ka di lo myo thu myar tway htet sin ye nay tar..ReplyDeleteHsaMarch 15, 2011 at 12:39 AMJU...ethnic တွေနှင်ထုတ်ချင်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လား...ဒါပါပဲ..ဒီလိုရှင်းရှင်းသာပြော..တတိုင်းပြည်လုံးကိုချုပ်ချင်တဲ့လူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာအဲဒါပဲ...သူတို့ ကျတော့တိုင်းရင်းသားတစုလို့ ...မဟုတ်တဲ့အတိုင်းပဲ...သနားပါတယ်..လူမျိုးကြီးဝါဒရှိတဲ့သူတွေReplyDeleteJuMarch 15, 2011 at 1:09 AMငါလဲဘာမှမပြောရပါလား :(ပြည်တွင်းမှာ ရန်မဖြစ်ကြဘူးလို့ ပြောတာပါ ဒါရန်ဖြစ်စရာမှမဟုတ်တာ ကလေးအတွေးပါကွာ ethic နှင်ထုတ်မယ်ဆိုတာ မြန်မာပြည်သာပြောင်းလဲကြည့် အဲဒီ ethic culture တွေကြောင့်ကမ္ဘာ ကျော်မှာ မြန်မာက ...peace ;DReplyDeletesuMarch 15, 2011 at 1:55 AMJu က သိပ် ပြောတတ်မမ တို့တတွေ ဘာသာတုချင်းယူတာအကောင်းဆုံးပေါ့World is village ပေါ့ReplyDeletechochoMarch 15, 2011 at 2:37 AMနင် တို့တွေ တော်ကြတော့...ကိုယ်တိုင်ရင်းသား မောင်နမတွေ...ဆက်ပြီး မပြောကြနဲတော့...နင် တို့အချင်းချင်း ရန်ဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူး...နွားကွဲ ရင် ကျားဆွဲတတ်တယ်...ဒါကိုတော့သိရမှာပေါ့...ဆက်ပြီးပြောနေရင်........ဖဖြတ်ကိုက်ရာကနေ..တစ်ရုပ်ရိုက်တယ် ဖြစ်နေအုန်မယ်......ကလေးတွေမဟုတ်ကြဘူးနော်..ရဲလေးကိုဘဲ ဝေဖန်ကြပါ...နင်တို့အချင်းချင်းရန်မဖြစ်ကြနဲ့ တော့...နောက်တစ်ခေါက်.တတ်မပြောဘူးနော်..ဒီတစ်ခါ လက်ပါလာမယ်နော်...ဟင်း........ReplyDeleteWinMarch 15, 2011 at 3:47 AMSorry Ju...it's for 1 +2= 12 ethnic တွေနှင်ထုတ်ချင်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လား...ဒါပါပဲ..ဒီလိုရှင်းရှင်းသာပြော..တတိုင်းပြည်လုံးကိုချုပ်ချင်တဲ့လူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာအဲဒါပဲ...သူတို့ ကျတော့တိုင်းရင်းသားတစုလို့ ...မဟုတ်တဲ့အတိုင်းပဲ...သနားပါတယ်..လူမျိုးကြီးဝါဒရှိတဲ့သူတွေReplyDelete1 +2= 12March 15, 2011 at 12:00 PMWin .. ဗမာတွေ ချင်းတွေကို မြန်မာပြည်ကနေ နှင်ထုတ်ချင်ခဲ့ရင် မြန်မာ့သမိုင်းမှာ ချင်းလူမျိုးဆိုတာတောင်ရှိလာမှာမဟုတ်ဘူး ။ အဟား တခြား တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုတွေနဲ့ ရန်မတိုက်ပေးနဲ့ ကျုပ်မုန်းသာ ချင်း .. ချင်းလူမျိုး မျိုးပျက်သုတ်သင်ရေးသာရှိခဲ့ရင် ကျုပ်ခင်ဗျားတို့ချင်းတွေရဲ့ လည်ကို အရှင်လတ်လတ် လှီးပစ်တယ်။ReplyDeletepureMarch 15, 2011 at 12:40 PMဟေ့ကောင် တော်တော့ မင်းကလေးလဲမဟုတ် လောက်ဘူးReplyDeleteKoMarch 15, 2011 at 1:32 PMကိုယ့်နိုင်ငံ မကောင်းကြောင်းပြောနေကြတာတွေ တော်ကြပါတော့ ဘယ်သူတွေ ဘာပဲလုပ်လုပ် ကျန်တော်တို့ ဟာ အမိမြန်မာရဲ့နိုင်ငံ့သားသမီးတွေပဲ အေးအေးဆေးဆေး ပြောကြပါ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျန်တော်တို့ ဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံကိုတော့ မစော်ကားကြပါနဲ့သူများနိုင်ငံတွေ ဘာကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ မြန်မာနိုင်ငံသာလျှင် ကျန်တော်တို့ အတွက် တကယ့် နေချင်စရာ အမိမြေပါ...... အကိုတို့ အစ်မတို့ ကို ဆရာလုပ်သလိုဖြစ်ရင် တောင်းပန်ပါတယ်...ReplyDelete1 +2= 12March 15, 2011 at 2:26 PMpure အဲ့ကောင်တွေ လူပါးဝတာကို မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင် ခံရမှ သိလှိမ့်မယ် ။ReplyDeleteDeeMarch 15, 2011 at 4:43 PM(နင်ပဲ ကြွေးကြော်၊ “ငါ မြန်မာ ဟေ့၊ ကိုယ့် လူမျိုးကို အပြစ်မရှိ သတ်တယ်၊ ဘုန်းကြီး တွေကို သတ်တယ်” လို့ ။ ငါ့နိုင်ငံ(မြန်မာ) မကောင်းဘူး လို့ပြောစရာကို မလိုတာ။ မြန်မာ မကောင်းဘူး ဆိုတာ တိုင်းသိ ပြည်သိ ပဲ။)အဲ့စကားကိုဘယ်သူပြောသွားတာလဲတော့မသိဘူး ကိုယ့် လူမျိုးကို အပြစ်မရှိ သတ်တယ်၊ ဘုန်းကြီး တွေကို သတ်တယ်ဆိုတာ စစ်တပ်ကဦးနှောက်မရှိတဲ့လူ၁စုရဲ့လုပ်ရပ်မှန်းလူတိုင်းသိတယ် မြန်မာပြည်သူတွေမဟုက်တာလည်းလူတိုင်းသိတယ်ခုဟာကြီးက စားသောက်ဆိုင်၁ဆိုင်ကို အချိုအရသာကိုကြိုက်တဲ့ လူ၁ယောက်က၀င်သွားပြီး အစပ်အရသာရှိတဲ့ဟင်း၁ပွဲကိုမှာစားကြည့်ရုံနဲ့ ဒီဆိုင်မှာရှိတဲ့ဟင်းတွေအကုန်လုံးကစပ်ပါတယ်လို့ စွပ်စွဲသလိုများဖြစ်မနေဘူးလား မြန်မာနိုင်ငံကစစ်တပ်ကဦးနှောက်မရှိတဲ့လူ၁စုကမကောင်းတာနဲ့ ၁နိုင်ငံလုံးကလူတွေမကောင်းဘူးဆိုတာမျိုးတော့မစွပ်စွဲလိုက်ပါနဲ့ ၂.(We Chin are poor because of you Buma, We chin are uneducated because of you Buma.) လာပြန်ပြီး၁ယောက်မဆီမဆိုင်အတွေးနဲ့ကိုစွပ်စွဲလိုက်တာ ﻿ရှေးရှေးကချင်းလူကြီးတွေကသာ ကိုယ့်နောင်လာနောင်သားတွေအတွက် တိုးတက်ချင်စိတ်တွေ ရည်မှန်းချက်တွေသာထားခဲ့ရင် နင်တို့ချင်းတွေ ဆင်းရဲစရာ ပညာမတတ်စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူး ရှေးချင်းလူကြီးတွေကသာ ကိုယ့်နောင်လာနောင်သားတွေအတွက် တိုးတက်ချင်စိတ်တွေ ရည်မှန်းချက်တွေသာထားခဲ့ရင် မြန်မာစာ မြန်မာစကားကို စနစ်တကျသင်ယူပြီး ကိုယ့်နောင်လာနောင်သားတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းခဲ့မယ် အဲ့ဒီ့က၁ဆင့် ကိုယ့်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ ကျောင်းမရှိရင်တောင်မှ တခြားပြည်နယ်ကိုတက်ပြီး စာအုပ်တွေဝယ်လေ့လာရင် မြန်မာစာမပြောနဲ့ English လိုအခြေခံကိုတောင်နားလည်နိုင်တယ်စီးပွားရေးဖြစ်အောင် ၁နိုင်ငံလုံးကလူတွေနဲ့ ပြောဆိုပြီး စီးပွားရေးလုပ်လို့ရတယ် ဥပမာပြောရရင် ကျောင်းသား၁ယောက်က တိုးတက်ချင်စိတ်တွေ ရည်မှန်းချက်တွေမရှိပဲ ပေါ့ပေါ့နေ ပေါ့ပေါ့စား စာမလုပ်ပဲ စာမေးပွဲဖြေတော့ ကိုယ့်ဘာသာကို အသုံးမကျလို့ကျတာကို စာမေးပွဲမေးခွန်းထုက်တဲ့ ဆရာမအသုံးမကျလို့ဆိုပြီးပြောနေသလိုကြီးများဖြစ်မနေဘူးလား ကိုကိုယ်တိုင်အသုံးမကျတာကို တခြားလူမျိုးတွေကြောင့်ပါဆိုပြီး အားအားယားယား စွပ်စွဲမနေနဲ့ တိုးတက်ချင်စိတ်တွေ ရည်မှန်းချက်တွေမရှိရင် နင်တို့ချင်းတွေမပြောနဲ့ ဘယ်လူမျိုးမှ စာတတ်လာမှာမဟုက်ဘူး ချမ်းသာလာမှာလည်းမဟုက်ဘူးReplyDeleteWinMarch 15, 2011 at 4:50 PMဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒတွေက သွေးနှောစနစ်ပဲလိုချင်တာအရာရာတိုင်းဟာ...စိတ်ရင်းစေတနာ...နဲ့မိတာစိတ်နဲ့ လုပ်မယ်(အုပ်ချုပ်မယ်)ဆိုရင် လွတ်လပ်ရေးတဲ့အချိန်နဲ့ ခုအထိ..ဒီလိုဖြစ်လာစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူး...လူမျိုးကြီးဝါဒကြောင့်..အမျိုးမျို လိုတဲ့စိတ်ကြောင့်ခံရတဲ့လူက ..ဘယ်လိုမှငြိမ်ငြိမ်မခံချင်လို့ ...နောက်ဆုံးတော့..ဒီလိုဖြစ်ရတာ...ReplyDelete1 +2= 12March 15, 2011 at 5:12 PMလူမျိုးကြီးဝါဒ လို့ ဘာလို့ စွပ်စွဲနေတာလဲ ? ကျုပ်ပြောနေတာ ဗမာ့ အရေးမဟုတ်ဘူး မြန်မာ့အရေးကိုပြောတာပါ ။ မြန်မာလူမျိုးအဖြစ် ဝန်ခံစေချင်တာ ။ReplyDeletejock707March 15, 2011 at 11:57 PMthank you ko yel lay u very bast boyReplyDeletethankfulMarch 16, 2011 at 3:37 AMမဆိုင်ဘူးလို့ သိသွားမယ်ဆိုရင် ဘာထပ်ရေးဖို့ လို သေးလဲ..ညီလေး..ပြန်ဖတ်ကြည့်အုံးမင်းကိုရေးတာမဟုတ်ဘူးလူမျိုးကြီးဝါဒရှိတဲ့..သူ..မင်းမှာရှိနေရင်တော့ထပ်ရေးပေါ့ဟုတ်ပြီးလား..ထပ်ရေးရင် ..အဲသလိုစိတ်ထားရှိလို့ပေါ့..1 +2= 12 .သနားပါတယ်..သူကိုပဲရည်ရွယ်တယ်လို့ ထင်နေတာသိပ်သနားပါတယ်....ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ်မသန့် ရင်..ပေါ့လေ..မင်းရဲ့ထိပ်ခေါင်းကိုမှန်ခဲ့ရင်တော့နာပေါ့ဟုတ်ပြီးလားReplyDeletechouMarch 16, 2011 at 4:25 AMကျောင်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားများကို စိတ်ကြိုက်ဘာသာစကားအဖြစ် သင်ယူနိုင်ရေး ပြဌာန်းပေးရန် အစီအစဉ်မရှိကြောင်း ပညာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ချမ်းငြိမ်းက ယမန်နေ့က ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် ပြောကြားသွားသည်။ ကျောင်းပြင်ပတွင် သင်ကြားလိုပါက ကူညီမည်ဟု လွှတ်တော် အမတ်တဦး၏ အမေးကို ပညာရေးဝန်ကြီးက ဖြေကြားသွားသည်။ Source: Irrawaddy BurmeseReplyDeletenway nwayMarch 16, 2011 at 7:02 AMone plus two,ကိုယ့်လူမျိူးအချင်းချင်းရန်တိုက်ပေးနေတာအတော်ရိုင်းတာပဲ။မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံမှာကိုကချင်းကပါပြီးသား၊ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိပြီးသား။သူတို့ဘယ်လောက်ဆွယ်တရားဟောဟောကိုယ်တိုင်မပါရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူး.နင်ကိုကသူတပါးကိုအလဟသမုန်းနေတာ.မုဒိတာပွားပါ၊တရားများများထိုင်။သူ့စရိတ်နဲ့သူသွားလိမ့်မယ်။ကံတူအကျိုးပေးတဲံ့။နင်ကိုကလူကိုမုန်းတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်နင့်ကိုလည်းပြန်ကြည့်မှာပဲ။တို့ဘုရားကဟောပြီးသားမုဒိတာပွားပါတဲံ့။ဒါလေးပဲပြောချင်တာပါ။စိတ်ရှည်၊သည်းခံတဲံ့နော်။ReplyDelete1 +2= 12March 16, 2011 at 11:59 AMnway nway ကျုပ် ချင်းလူမျိုးကို မုန်းတယ်ပဲပြောထားတာပါ ။ ကျန်တဲ့ လူမျိုးတွေကိုရန်တိုက်တဲ့စာလုံးတစ်လုံးမှမရေးမိဘူး ။ ကျုပ်ထပ်ပြောမယ် ။ ကျုပ် ချင်းတွေကိုမုန်းတယ် ။ချင်းမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးကို အခွင့်အရေးရရင် လည်ကို ဓားနဲ့ အရှင်လတ်လတ်လှီးသတ်ချင်တယ် ။ ရှင်းပြီလား ? ကျုပ် ဒီပိုစ်မှာ ကောမန့် ထပ်ပေးတော့မှာမဟုတ်ဘူး ။ မကျေနပ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုမယ်စိတ်ကူးရင် http://goldenlandmyanmarblog.blogspot.com/ ပေးထားတဲ့ လင့်ခ် ကိုသာလိုက်ခဲ့ကြပေတော့ ။ P.S ချင်းမျိုးနွယ်စုတစ်ခုလုံး ပျက်စီးပါစေလို့ကျုပ်အမြဲဆုတောင်းနေမယ် ။ReplyDeletesnowpyuMarch 16, 2011 at 12:24 PMမိတ်ဆွေတိုရေ...may ဆိုတဲ့တယောက်ပြောပြောနေတဲ့ ချင်းတွေကိုခေါ်ပြီးဘုန်းကြီးတွေကိုသတ်ခိုင်းတယ်ဆိုတာ..confirm လုပ်တဲ့သူရှိလို့လား..အဲဒီတုန်းက.ဦးစဉ်းတပါးကို..သတင်းထောက်ကမေးတော့..စစ်သားတွေစကားပြောတာအသံဝဲတယ်လို့ပဲဖြေတာပါ..မြန်မာပြည်မှာ..ချင်းမှအသံဝဲတာမဟုတ်ပါဘူး.ဗမာထဲမှာတောင်..နေရာဒေသကိုလိုက်ပြီးလေယူလေသိမ်းတွေမတူကြပါဘူး..တကယ်ပဲချင်းစစ်သားတွေဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်.သူများဘုရားမိုလို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တော့ပါမယ်မထင်ပါဘူး..အာဏာကိုမလွန်ဆန်နိုင်လို့ပဲဖြစ်မှာပါ..ReplyDeletekimnuMarch 16, 2011 at 7:20 PMWhat you guys taking about? That YE lay Was asshole fucker,, Mother fuck,,Mother's asshole fucker Burmese..Rap ... Fuc, fuc.. fuc,, fucker ,, Bur,, bur,,Burmese yea,,yea,,, Oo my goodness the song was very nice.. That's what "Ye LE" all mother fuck burmeseReplyDeletemimiMarch 16, 2011 at 10:06 PMရဲလေးရေ အမြဲအားပေးမယ်နော်ReplyDeleteFBA357March 17, 2011 at 5:05 AMso wht ..a .. as .. ass .. assshole .. KimnuReplyDeletechitlunlayMarch 17, 2011 at 5:43 AMcommenet အားလုံးတော့ မဖတ်နိုင်ဘူး များလို့ ... နိုင်ငံခြားမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားလို့ ပြောရင် 95% ကတော့အထင်သေးပြီး စကားတောင်သိပ်မပြောချင်ကြတာများပါတယ်.အတွေကြုံအရ ပြောတာပါ ...ဆိုတော့ လူတော်တော်များများ မြန်မာ ပါလို့ ပြောရမှာ ရင်လေးကြတာ အမှန်တရားတစ်ခုပါ ... သူများနိုင်ငံသားတွေကြားမှာ ဒို့ မြန်မာပြည်သားတွေဘယ်လောက်ထိ မျက်နာငယ်ရတယ် ဆိုတာ နိုင်ငံသားတွေနဲ့ ပတ်သက်ဖူးတဲ့သူတိုင်းအသိပါဘဲ..ကိုယ်နိုင်ငံကိုမချစ်တဲ့ သူမရှိပါဘူး .. နောက်ပြီး အပေါ်ကcomment တွေက ချင်းတွေကိုတော်တော်ဖဲ့ထားတယ်နော် ..သူ့ အမြင် ကိုယ့်အမြင်တွေတော့ ဘယ်တူမလဲ..နောက်ပြီးတော့ သမိုင်းတွေဘာတွေ ရောရေးတာတွေ့ တယ် မြန်မာ့သမိုင်း တကယ်တော့ မရှိဘူး ဗျူ မွန် ခမာ တွေက တကယ်သမိုင်းတွေရဲ့ အစဘဲ..ကျောင်းသင်ရိုးမှာတော့မပါဘူး..နောင်တချိန်မှာ လွတ်လပ်ရေးရပြီးရင်တော့ သင်လို့ ရပြီး သမိုင်းအမှန်ကိုသိခွင့်ရလာမှာပါ...ReplyDeleteWawMarch 17, 2011 at 10:10 AMလေးစားပါတယ်ရဲလေး.. တို့ကိုယ်တိုင်တောင် ဘယ်ကလာလဲလို့မေးရင် မြန်မာပြည်ကလာတယ်လို့ သိပ်ဖြေချင်တာမဟုတ်ဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ မသိတဲ့လူတွေက မြန်မာဆိုတာဘာလဲလို့ပြန်မေးကြတယ်.. သိတဲ့လူတွေက အောင်ဆန်းစုကြည်ခုဘယ်လိုနေလဲ...စစ်အစိုးရကဘယ်လိုလဲ လို့နော်ကဆက်တွဲမေးခွန်းတွေဆက်ဖြေရတယ်။ သိပ်စိတ်ညစ်တာဘဲ ဒါကြောင့်တို့ ကမြန်မာ-တရုတ်နယ်စပ်ကလူဆိုတော့ တရုတ်ပြည်ကလို့ပြောလိုက် မြန်မာပြည်ကလို့ပြောလိုက်နဲ့ ပတ်ချာလည်နေခဲ့တာပါ။ ရဲလေးကိုလေးစားပါတယ်။ ခုဆိုရင် ကိုယ့်နိုင်ငံအကြောင်းရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောဖို့ စဉ်းစားထားပါတယ်။ReplyDeleteDevilMarch 18, 2011 at 12:43 AMရဲလေး အကြောင်းပြောရင်း ကိုယ်မကောင်းတာတွေ ဖော်ပြတာမကောင်းပါ။ မကောင်းတာ နိုင်ငံတော် ဂေါင်းဆောင်ကြီးတေလေReplyDeleteDevilMarch 18, 2011 at 12:46 AMကျွန်တော်တို့မြန်မာထဲ မှာ ဒီလောက်ရိုင်းတဲ လူငယ်လေးတွေ မတွေ့ဘူဖူးဘူးReplyDeletesoeMarch 18, 2011 at 11:38 PMကျနော်တော့ပြောဖြစ်ပါတယ်လို့ ဒါပေမဲ့ သူတို့မသိရှာဘူးဖြစ်နေတယ် တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုပေါ့နော် ဒါပေမဲ့ close to china လို့ရှင်းပြပေးရင် သူတို့သိပါတယ် china ကိုပေါ့နော် အမေရိက ကလူတွေလည်းအထင် မကြီးပါဘူး ဒီအဖြူကောင်တွေဟာ တချို့ဆို ဘာမှန်းမှ မသိတဲ့လူအများကြီး ကိုယ့်နိုင်ငံမြေပုံတောင် ဆွဲတတ်မယ်မထင်ဘူးReplyDeletesoeMarch 19, 2011 at 12:04 AMဆက်ပြောဖို့မေ့နေတယ် ကျနော်လည်းအရမ်းအံသြနေတယ် အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပေါ့နော် ကျနော်က ကရင်လူမျိုးပါ အများအားဖြစ် ကျနော်တို့ကရင်တွေက ဗမာစစ်တပ်ရဲ့နိုပ်စက်မှုကိုအများအားဖြင့်ခံရတယ်လေး အဲတေ့ာ ဒီအမေရိကကို ရောက်လာတော့ သူများတွေက မေးရင်ဘာလူမျိုးလည်းကရင်ပါ မြန်မာလူမျိုးလို့မပြောချင်ကြဘူးလေးဆိုတော့ ကရင်ကိုသူတို့ကမသိဘူးလေး မြန်မာနိုင်ငံလို့ပြောရင်တောင်သူတို့မသိဘူးလေး ဆိုတေ့ာ ကရင်လူမျိုးဆိုပိုဆိုးတာပေါ့နော် မသိတာ ဒါပေမဲ့ကျနော်ကဘယ်လိုပြောလည်းဆိုတော့ my country is burma ethnic group is karen . အမြဲတမ်းကျနော်ပြောဖြစ်တယ် ခုဏက ရဲလေးကိုဝေဖန်ပြီးပြောပေးတာကို ကြည့်ပြီးအံသြသွားတယ် ကိုယ့်နိုင်ငံကိုတောင်မပြောရဲတဲ့လူရှိသေးပါလားဆိုတာ တခုတော့ရှိတယ် ကျနော်ကရင်လူမျိုးအများစုဟာ ဗမာကိုအရမ်းမုန်းသွားတယ်ကျနော်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ် ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ဗမာစစ်တပ်ရဲ့ ရက်စက်မှုကိုအသက်နဲ့ရင်းပြီးခံရတော့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီးသူတိုိ့ကို အပြစ်တင်ရဲမလည်းနော် သူများနိုင်ငံကိုရောက်တဲ့လူတိုင်းဟာ ကိုယ့်လူမျိုးထက် ကိုယ့်နိုင်ငံကို သိဖို့လုပ်သင့်တယ်ReplyDeletemaungkokoMarch 19, 2011 at 6:31 AMမြန်မာနိုင်ငံ မှာမွေး၊ ကြီး ၊ပြီးမှ နိုင်ငံခြားေ၇ာက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံက ပါလို. မဖြေတဲ.သူတွေ အားလုံး ဆောက်၇ှက်မ၇ှိတဲ.သူတွေကျွန်တော်ဆို မြန်မာနိုင်ငံက လာတဲ ဟိနူလူမျိုးတစ်ယောက်ပါ ။ဒါပင်မယ့် ဘယ်သူမေးမေး မြန်မာနိုင်ငံကပါလို.ဖြေတယ်။ မသိ၇င်၇ှင်းပြတယ်။မဖြေတဲ.သူတွေ နိင်ငံခြားမှာ ဘာကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆောက်ထင်ကို မကြီးဘူး။ReplyDeletemaungkokoMarch 19, 2011 at 6:33 AM၇ဲလေး၇ဲ.သီချင်းတွေကိုမကြိုက်ပင်မယ့်စိတ်ဓာက်ကို တော့ လေးစားပါတယ်။ReplyDeletemnMarch 19, 2011 at 12:00 PMမြန်မာ စစ်တပ် က မနှိပ်စက်ဘူးတဲ့ တိုင်းရင်းသား တမျိုးမျိုး ရှိခဲ့ရင် ပြောပြစမ်းပါ.... မြန်မာစစိတပ်က နှိပ်စက်လို့ ဘမာတွေကို ကရင်တွေက အရမ်းမုန်းတယ် ဆိုတာ ဦးဏှောက် မရှိတဲ့ ကောက်ချက် ကျန်တဲ့ ဘမာတွေ အပေါ် တရားမျှတမှု မရှိတဲ့ ကောက်ချက် လို့ ကရင် တမျိုးသားလုံးကို ဒီနေရာက အော်ပြောလိုက်ပါတယ်....ReplyDeletemnMarch 19, 2011 at 12:01 PMသောက်တလွဲ ကရင်တွေ လို့လဲ ဆဲ လိုက်ပါတယ်ReplyDeletebamagyiMarch 28, 2011 at 9:21 AMfuck you mother all the ethnic people,remember ,bama is all the ethnic father,ReplyDeletetinaMay 9, 2011 at 11:05 AMI'm proud of u.ReplyDeleteABF357July 5, 2011 at 1:06 PMAttn..FBA357. I think..you jelious to your Chin classmate..is it right...ReplyDelete-July 5, 2011 at 6:32 PMHi friends, Yelay is performing his art talents which should not have anything to do with ethnic issue. FBA357 seems to be an uneducated or educated but having no accurate reasoning. Just enjoy Yelay's performance and take jealousy out of your brain. I want to tell you, all ethnic people in Burma such as Kachin, Karen, Chin, Shan, Mon used to be just independent nation until they lost their autonomy through deceptive agreements. A Chin will never beaBurmese. A Burmese will never also beaChin. This is completely different. Alright! Please do not promote ethnic conflicts - hidden bloody experiences.. We already had too much chaos already.ReplyDeletetawkzamJuly 6, 2011 at 10:29 AMThis comment has been removed by the author.ReplyDeletebawhteJuly 6, 2011 at 10:55 PMDear All, we Chins never claimed to be smarter or richer or bigger than anyone or any peoples in Burma and outside. But one thing we always do believe is that we areadistinct nation or people who live in their inherited land. We do not believe inafake union. And we always believe that, one day, we will achieve our independence and establishasovereign country of our own. And we solemnly teach our younger generations / peoples the importance of independence and the cause of freedom inside self sovereignty. Unfortunately, we will take sometimes to do that. And I personally believe that independence is onlyasolution for Burma political crisis. The Chin independence movement has begun and no one can stop it. This is God's willing. Some frustrated comments like these here are expected because it's not the unusual things for us to hear. We already heard it from polices, soldiers and high ranking officials from Bamaland. It's normal that thing can slip out when it gets intensified. This is justapiece of encouragement that we Chins need to work harder and think better. So what we Chins need to do? We know what we are and we do know what we need to do. Peace to you all.ReplyDeleteWinThuzarJuly 6, 2011 at 11:05 PMကိုယ့်ဗမာလူမျိုးအချို့ အစုတ်ပလုတ်တွေကို သနားပါတယ်၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေ ကြီးပွားတာကို မနာလို…..စိတ်ဓါတ်ကိုက အညံ့စားတွေ….ညီမကတော့ တိုင်းရင်းသားအားလုံးကို လေးစားပါတယ် ချင်းလူမျိုးဆို ကြိုက်တယ်…ရိုးသားတယ်၊ ပွင်းလင်းတယ်၊ ချောတယ်၊ သဘောထားလဲကြီးတဲ့သူတွေများပါတယ်။လူးမျိုးရေးမုန်းတီးမှုတွေပါတဲ့ စာသားလေးတွေ ပို့စ်လုပ်တာဟာ တကယ်တော့ ရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်…ReplyDeleteMi ThweJuly 7, 2011 at 2:03 AMသူဇာပြောတာ ထောက်ခံတယ်…အရမ်းသနားဖို့ကောင်းတဲ့….ရှက်ဖို့အကောင်းဆုံး စာကြောင်းလေးတွေ ရေးတတ်တာ တို့ဗမာအစုပ်ပလုတ်ကောင်လေးတွေပါ… ဗမာလူမျိုးမဟုတ်တဲ့ လူမျိုးက “မြန်မာပြည်ကပါ” လို့ ပြောစရာလိုလို့လား၊ သူတို့သဘောဘဲလေ…US မှာတွေ့သမျှ တိုင်းရင်းသားတွေ ရိုးသားကြိုးစားကြတာ မျက်မြင်ဘဲလေ…ချင်းလူမျိုးအားလုံးကို လေးစားပါတယ်၊ ခင်ဖို့လဲကောင်းပါတယ်… မနာလိုမုန်းထားစိတ်နဲ့ နာမည်ရင်းတောင် မဖေါ်ရဲဘဲ ချင်းအမျိုးသမီးလေးတွေရဲ့ ဂုဏ်ညှိုးနွမ်းအောင် ပိုစ်ရေးသူဟာ...တကယ်တော့ ငကြောင်ဖြစ်ဖို့များပါတယ်... 1+2=12 တို့လိုလူမျိုး… မသွယ်တော့ ရွံလေးရွံတယ်...မုန်းလဲမုန်းတယ်။ Filthy Burmese bastards လို့သာ သတ်မှတ်ကြဖို့ကောင်းပါတယ်...ReplyDeleteNu SungJuly 7, 2011 at 2:13 AMI amaChin people, I live in Mizo State, India. My friends also are Chins. They live in Manipur State and Naga State in India. I know that you talk about Chin people. But I cannot understand the circling language (Maybe Burma language) if you talk about CHin people please write in English. So we all Chin people can understand. But now onlyafew Chin can understand what you are talking about. There are over4millions Chin people in India. Please in English. Ok.. Whenever you talkabout Chin and Chin people dont write in cycling word.. (Burmese)ReplyDeleteချိုဇင်ဦးJuly 7, 2011 at 2:48 AMရိုင်းစိုင်းလှချည့်လား တို့ဗမာကောင်တွေ..... I love the Chin people much better than these mother fucking Burmese brutes!ReplyDeleteMa-ae LooJuly 7, 2011 at 4:25 AMFBA357, one plus two, May, su, blah blah blah တွေ က one man ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ ချင်းလူမျိုးတွေကို သူတစ်မင်တိုက်ခိုက်နေတာပါ။ ချင်းလူမျိုးတွေပေါမှာ မနာလိုစိတ် ပြင်းထန်နေတဲ့ စောက်ကျင့်ကိုက ညံ့ဖျင်းလွန်းတဲ့ ခွေးလူမျိုးပါကွာ။ ငါတို့ ဗမာလူမျိုးစာရင်းထဲမှာ မထည့်သင့်တဲ့သူ၊ သူများတိုင်းတစ်ပါးသားကို ဖင်ခံပေးမယ့်ကောင်မျိုး…. Was he begging to the Chin people in Maryland? Who knows! ခွေးတစ်ကောင်ကြောင့် ငါတို့ ဗမာလူမျိုးသိက္ခာကျ ပါတယ်ကွာ။ ချင်းလူမျိုးကိုမှ မနာလိုစိတ်ပွားပြီး ရန်ထောင်ရနေလို့နော်……..ReplyDeletesteveJuly 7, 2011 at 5:39 AMpiss off you FBA357, better you stop taking nonsense racism or whatever....Don,t never/ever mention the Chin again. How much do u know about the Chin people ? Stop from now on... Come to Melbourne ,if you think you are so smart. I am gonna kick your ass. Stop pulling the trigger,if not,it may turn into your face .....ReplyDeletecercinloveforeverJuly 7, 2011 at 8:36 AMIDK who da ful yall talking about but u will never gonna talk about dis no more cuzz i will fuk u....I am chin....R U jealous becuzz we said "chin" instead of "Burmese',,,,,,Dnt u ever talk about chin people becuzz we all can fuk u hard....Who ever talk about chin jux go fuk youself dat way u can stop talking about chin,,Fuk yall nigga bitch assholeReplyDeleteMaungJuly 7, 2011 at 9:17 AMရှေ့အရပ်၌ရှိသော......ဘေးရန်ခပ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ..ဆင်းရဲခပ်သိမ်းသိမ်းငြိမ်းကြပါစေ...နှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းကြပါစေ....နောက်အရပ်၌ရှိသော......ဘေးရန်ခပ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ..ဆင်းရဲခပ်သိမ်းသိမ်းငြိမ်းကြပါစေ...နှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းကြပါစေ....မြောက်အရပ်၌ရှိသော......ဘေးရန်ခပ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ..ဆင်းရဲခပ်သိမ်းသိမ်းငြိမ်းကြပါစေ...နှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းကြပါစေ....တောင်ရပ်၌ရှိသော......ဘေးရန်ခပ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ..ဆင်းရဲခပ်သိမ်းသိမ်းငြိမ်းကြပါစေ...နှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းကြပါစေ..........ReplyDeletebawhteJuly 7, 2011 at 10:03 AMHey @May, @1+2=12, @Ko Zaw, @stupid...You guys are just some of narrow-minded Bama bitches with some very poor analytic skills. You just speak of your minds and it show what you think of us. I think if we go back to the core, the word war here isaresult of political problem which becomesasocial problem. So maybe, you guys need to know about how we got ourselves into the mother fucking social problems that we have with our Bama brothers and sisters here. At the first place, the Chins should not have get involved in Panglong Agreement. It's true our former politicians who signed the Agreement were fucking stupid. That is because they believed in the mother fucking persuasion of Bama leader Genernal Aung San. If they were not fucking stupid, then we would not have this at all. So what I would suggest is that, perhaps, you guys should havealittle so-called respect to peoples like the Chins who got trapped in the mother fucking political stigmatization imposed upon by the mother fucking Bama nationalistic politicians and military. You guys need to attend basic civility course from you great great grandfathers who are no longer here. I do not know if it applies to some or all Bama, but what I have found out afteradecade of studying Asian civilizations is that Bama social integration has score the lowest. I have been to many countries around the world and it is unbelievable that Bama social perception is far away below others. Unfortunately, I am from that fucking shit country. Maybe, that isagood point for you to start about knowing yourself.ReplyDeleteWineWineJuly 7, 2011 at 12:43 PMယောင်္ကျားဖြစ်ပြီး ဒီလောက်စိတ်ဓါတ် အောက်တန်းကျတဲ. ငါတို.ဗမာတွေကြောင်. မြန်မာပြည် မတိုးတက်တာ..တိုင်းရင်းသားတွေ တိုးတက် ကောင်းစားတာကို ပေါ်တင်ကြီး မနာလိုဖြစ်နေတာ အရမ်းရွံဖို. ကောင်းတယ်.. မကျေနပ်တဲသူကို ပြောပါလားး..ဘာ.ကြောင်. လူမျိုး တခုလုံး မိန်းခလေးတွေပါမကျန် စော်ကားနေတာလဲ.?? မင်းနဲ.မင်းရဲ.ကိုယ်ပွါး ၅ယောက်ရဲ ကွန်မင်.ကိုကြည်.ခြင်းအားဖြင်. မင်းဟာ တောကလာတာ..ဘာပညာအရည်ချင်းမှ မရှိတာသေချာတယ်.မြန်မာသမိုင်းကြောင်းလဲ မင်း မသင်ဘူးဘူးနဲ.တူတယ်.အင်းစိန်တိုက်ပွဲမှာ ချင်းသေနတ်ကိုင်တပ်ရင်းသာမရှိရင် ရန်ကုန်မြို.ကို ကရင်သိမ်းပိုက်မှာကို မင်းမသိဘူးထင်တယ်Mr.(FBA137+may+Suh+blah blah=1+2)ReplyDeleteChin HillsJuly 7, 2011 at 4:36 PMif you are brave enough, anytime anyplace to all the Chins Haters! and you know, we are all over the world. we dont do this website argument shit. if theres no chins, Burma never be exist on the surface of earth. tired of saving all the Bama since Bagan era till stupid Military Myanmar Govt. and im serious bitches fuck yall to the haters. if you wanna get kill just email me suatuang@gmail.comReplyDeleteChinland DefenderJuly 7, 2011 at 8:35 PMThis comment has been removed by the author.ReplyDeleteနဂါးကြီး ဘလော့July 7, 2011 at 9:15 PMမြန်မာပြည်သား တွေပဲဗျာ... ခလေးဆန်တဲ့ စကားတွေ ကို သိပ်ဘွေ မယူပေးကြပါနဲ့။ တောင်းပန် ပါရစေ။ ကျွန်တော် ဟသ်တသား။ ဗမာစစ်စစ်ပါ။ ပြည်ပမှာ ချင်းလူမျိုးတွေကူညီလို့ အစဉ်ပြေတဲ့ သူတွေလည်း အများကြီးပါ။ တိုင်းရင်းသား ဆိုပြီးနှိမ်တဲ့ စကားတွေ မသုံးသင့်ပါဘူး။ မြန်မာ လူမျိုး ဆိုတာလည်း စာရေးဆရာသန်းနိုင်ဦးရဲ့ စာအုပ်ကို ကိုးကားပြော ရရင်၊ ကုလားပြည် က စစ်ရှုံးပြီး ခွေးပြေး ၀တ်ပြေး ထွက်ပြေးလာတဲ့ ကုလားမျိုးရိုးတွေပါ။ ယခု မြန်မာပြည်ဆိုတာ ပျူ၊ ရှမ်း၊ မွန်(သုဝဏဘူမိ သထုံပြည်၊ နှင့် ရခိုင်ဝေသာလီပြည်၊ ကရင်တွေရဲ့ တီ ၉ တီ ရှိခဲ့တဲ့ နေမြေရင်း တွေပါ။ သူတပါးနယ်ထဲ ကျူးကျော်လာတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ကိုယ့်လူမျိုးသိခါ ချနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သမိုင်းအမှန်ကို လိမ်လို့မကောာင်းလို့။ အဲလေ၊ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်၊ သမိုင်းကို နောက်ချန်ထား.. . စေတနာ ရှေ့ထားပြီး တိုင်းရင်းသား ပြည်ထောင်စု တွေပဲ။ အချင်းချင်း မကဲ့ရဲ့ သင့်ပါဘူး။ အားလုံးကိုစား...ချင်းမိတ်ဆွေတွေကို ဦးညွတ် တောင်းပန်ပါတယ်။ReplyDeletekopaupiJuly 7, 2011 at 9:41 PMFBA357 fuck ur asshole...........................................FUCK U!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ReplyDeleteorchidlandJuly 7, 2011 at 10:22 PMFBA357, one plus two, May, su, blah blah blah mother fucker...........hahahaaaReplyDeleteLinn LinnJuly 8, 2011 at 2:04 AMHELLO...FBA357,1+2,su,Blah,may...မင်း ယောင်္ကျားဆိုရင်နာမယ်ရေးပါလား..ဘာကြောင်. ချင်းပြည်နယ်ကလာတယ် ပြောရုံလေးနဲ.ဒီလောက် ဘာသာရေး လူမျိုးရေးပါ ပုတ်ခတ် စော်ကားနေတာလဲ..သတ္တိရှိရင် ချင်းလူမျိုး မရှိတဲ.နိုင်ငံ ကမ္ဘာမှာမရှိဘူး မင်းနဲ. အချိန် နေရာ မရွေး မင်းကိုရင်ဆိုင်ဘို.ကြိုဆိုပါတယ်.. ခွေးသူရဲဘောကြောင်သလိုတော.လေနဲ.လာမဟောင်ပါနဲ..shut up..mail me....xuan2727xuan@gmail.comReplyDeleteSui Than SangaJuly 8, 2011 at 3:00 AMIt's sad that Thein Sein and his bloody associates continue to glorify over sixty years of civil wars of discrimination against fellow citizens for which the common people suffer terribly. Burmese military regimes should be so ashamed for raping, murdering and committing unspeakable human rights abuses against Chin, Kachin, Karen, Shan, Mon and other ethnic minorities.ReplyDeletemercyJuly 8, 2011 at 4:35 AMHello ! What the hell you guys always talk about Chin? Are you so jealous of chin are being well in western ? Who commented to kill the bald who are gods of Burma? Isn't he Burma? Think of it ! Most of people in Yangon are Burma right? Let me ask you something is there honest people in Yangon? Who always cheat about money in Yangon are Burma. Is that right or am i lying? Answer! Here in the Netherlands there is some Burma .they are just liked before that they want all free. Even the shit is free i guess they will eat it. You know the world ? Burma like free that much. IfaBurma is in chin society , he doesn't dare to open his mouth just like Burma's said to chin. Ok let it be however it is , sadly you(Burma) are still in the poorest country right? But you (Burma)don't need to be so jealous of chin that much. You will be ok like being in hell under your Burma Than Shwe. By the way when i were in Myanmar my parents had many slaves among them some is Burma you know they all are the same that they like all free and thief money shamelessly . So Burma why are you so proud of being Burma ? I feel sorry for you .ReplyDeleteMercyJuly 8, 2011 at 4:49 AMI think there was no one who watched Ye Lay excepting few Burma . HeheReplyDeleteChinOriginJuly 8, 2011 at 8:01 AM1+2=12,FBA357,su,may,blah blah...i know that you can't write English... OK?လူဆိုတာ နေ.စဉ်နဲ.အမျှကိုယ်.ဘဝတက်လမ်းအတွက် တိုက်ပွဲံဝင် နေရတယ်..မင်းတို.လဲ မြန်မာပြည်မှာ မင်းတို.ဝမ်းတစ်ထွာအတွက် လုယက်သတ်ဖြတ် တိုက်ခိုက်နေကြတယ်.. ငါတို.ဘဝရှေ.ရေး အတွက် ဘယ်သူမှဒုက္ခမပေးဘဲ အနောက်နိုင်ငံနဲ. ဥရောပ နိုင်ငံတွေမှာ သွားရောက်နေထိုင်တာ မင်းတို.မနာလိုဖြစ်နေတယ်..မင်းတို.ခုလို နှိမ်တာဟာ ငါတို.တိုးတက်မှုအတွက် အားဆေးပါ..that was our strength & stepping stone..တခုတော.ပြောမယ်..မင်းက(ချင်းတွေရဲ့ လည်ကို အရှင်လတ်လတ် လှီးပစ်တယ်။)ဟားဟား....မင်းတို.က လူကိုမပြောနဲ.ကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ.ဘုန်းကြီးတောင် သတ်တဲ.လူဆိုတာ ကမ္ဘာကသိပြီးသားပါ.ဒါလားစောစောထပြီး သတ္တဝါအပေါင်းကိုမေတ္တာပို.တာ..မင်းရဲ.အဘိုးသန်းရွှေ ၇ဲ.ရွှေမြန်မာဟာ ကမ္ဘာ.တိုးတက်မှုအနှေးဆုံးနဲ.အဆင်းရဲဆုံး နံပါတ် ၂ ဖြစ်နေတာ မင်းရဲ.အဘိုးကိုသွားပြောလိုက်အုံး..အောက်တန်းကျတဲ.အတွေးခေါ်..သူတပါးအပေါ် မနာလို ရန်ညှိုးထားပြီး သတ်ဖြတ်တာ သမိုင်းကသက်သေပြနေတယ်..သီပေါမင်းခေတ် မှ မင်းရဲ.ဘိုးတော် သန်းရွေ အထိ..မင်းလဲ သူတို.အမွေရထားတော. ငါတို.ကို သတ်ချင်တယ်ပေါ..လာပါ လက်ပိုက်ကြည်.နေပါ.မယ်ခွေးသူတောင်းစားရဲ...ReplyDeletemercyJuly 8, 2011 at 1:40 PMWow brilliant what chin origin said. I really respect you. The way you write the words you used are so educated. Thank you !ReplyDeletewahJuly 8, 2011 at 4:18 PM@FBA357 I coukd imagine that the Chin people around you are so smater than you. That's why you are so jealous with them, right? You sons of bitch Burmese never wan na see other people getabetter chance and position. That's the reason why the Burmese soldiers are killing people, raping young ladies and women, burning and destroying other ethnic groups villages .Even dg knows it's owner but Burmese is the only race who killed it's gods (bald men). You know that these acts is bellow animals. So are you still proud to be it? ha ha! I love Chin much much more than you mother fucker evil burmese race. he he he....ReplyDeleteangJuly 9, 2011 at 10:15 PMFuck you,FBA357, one plus two, May, su, blah blah blahFuck Fuck you guys :-)If u guys so jealous us(all of Chin people) lick the ass of your mother,http://www.youtube.com/watch?v=OK4fJhbRL1gReplyDeleteTtutpiJuly 10, 2011 at 1:38 AMDear Friends,Why don't you guys stop arguing with NOBODY!If you go back and read the history of Burma thoroughly, you will see the historical facts about Kachin, Karen, Karenni, Chin, Mon, Rakhine, Shan, Pyu and Thet, but NO BURMANS unfortunately !!!The Burmans just appeared into the history of Burma inasudden somewhere at sometime from nowhere! Nowhere / * - + Nobody = NOTHINGSo, don't waste your precious time for NOBODY meant for NOTHING! WHY? Just becuase you guys are somebody meant for something! Cheers!TtutpiReplyDeleteBIKAAJuly 10, 2011 at 5:13 AMMother Fucker Bama,Don"t be challege Chine People in Foreign Land,If you want to give your Life sayagain,We can kill in any time,Don"t be thinking like your mother Fucker Land Bama.All ethenic hate Bama you Know?ReplyDeletedavidhnangaJuly 12, 2011 at 10:40 AMFBA357, one plus two, May, su, blah blah blah Fuck You Guys.... your mother assholeReplyDeletedavidhnangaJuly 12, 2011 at 11:13 AMThis comment has been removed by the author.ReplyDeletedavidhnangaJuly 12, 2011 at 11:22 AMFBA357, one plus two, May, su, blah blah blah 1+2= ....မင်တို့ ကောင်တွေယောင်္ကျားပီတ တယ်ဆိုရင်ထပ်ရေးပါလာ.........ငကြောင့်တွေ.... ခွေးသူတောင်းစသူရက်ကောင်းလေးတွေရယ်...ငါချင်းအစစ်မှအစစ်ကွာ... မင်းတို့ ကောင်တွေနဲ့အချိန် နေရာ မရွေး မင်းတို့ ကိုရင်ဆိုင်ဖိုး.ကြိုဆိုပါတယ်..FBA357, one plus two, May, su, blah blah blah 1+2= မင်းတို့ ကောင်တွေသိထားဖိုးက...ချင်းတွေကယ်လိုက်လို့ ငါတို့ ... Bama (ဗမာ)အသိမ်းမခံရတာဆိုတာ..နင့်တို့ ကောင်းထဲ့မှာ..မြတ်မြတ်မှတ်ထား...mail me....salaivabihnanga@gmail.comReplyDeletebawhteJuly 12, 2011 at 9:52 PMမငျးပွောမှငါလညျးပိုပွီးဒေါသထှတျလာတယျ။ လှတျလပျရေးရခါစ ရောငျစုံသူပုနျတှထေပွီး ကရငျတျောလှနျရေးသမားတှကေ အငျးစိနျကို သိမျးပိုကျဖို့ တိုကျခိုကျခဲ့စဉျမှာ ခငျြးလကျနကျကိုငျတပျရငျးခေါငျးဆောငျကွီး ဗိုလျမှုးကွီးဟနျထီးယိုးနဲ့သူ့ရဲ့ခငျြးတပျမတျောသားမြားဟာ ပွညျထောငျစု အတှကျဆိုပွီး ဗိုလျမှုးကွီးကိုယျတိုငျ အသကျစတေးပွီး ကရငျကို တိုကျခိုကျခဲ့တယျ။ ခငျြးတပျမတျောသားမြားလညျး သယျခဲ့ကွတယျ။ ပွီးမှအောငျပှဲလညျးခံခဲ့ကွတယျ။ အခုမှ ငါတို့ခငျြးတှကေို နှိုငျးခငျြသလိုနှိုငျး၊ သူတို့ဘုနျးကွီးတှကေိုပွဈတဲ့သူဟာ ခငျြးစဈတပျတှပေါလို့ပွောလိုပွောနဲ့ ဘယျလောကျရငျနာစရာကောငျးသလဲ။ အခုတော့ ဗမာစဈတပျက ကရငျကိုလညျးနိုငျပွီ၊ တပျမတျောလညျးအငျအားတောငျ့လာပွီ ဆိုတော့ ဗမာအငျပါယာကွီးကို ပွနျပွီးတညျဆောကျလို့ရပွီပေါ့။ အမှနျတကယျပွောမယျ ဆိုရငျ ငါတို့ခငျြးတှဟော ဗမာပွညျနဲ့ဗမာပွညျသူပွညျသားတှေ အပျေါမှာ ဘာအကွှေးမှမရှိဘူး။ ဗမာပွညျနဲ့ပေါငျးလို့ ဘာအကြိုးမှမခံစားနိုငျရငျ ကွိုကျတဲ့အခြိနျမှာ ခှဲထှကျနိုငျတယျ၊ ကွိုကျတဲ့အခနျြမှာ သီးခြားနိုငျငံကို တညျထောငျလို့ရတယျ၊ တာဟာ ငါတို့ရဲ့ အမြိုးသားအခှငျ့အရေးပဲ။ ငါတို့ဟာ ဗမာကို ဆပျကွှေးတငျခဲ့လို့၊ သူတို့ကိုစဈရှုံးခဲ့လို့ သူတို့သွောဇာအာဏာအောကျမှာ နထေိုငျနရေတာမဟုတျဘူး။ ဒီအခကျြအလကျတှကေို ကွညျ့ခွငျးအားဖွငျ့ ငါတို့ခငျြးလူမြိုးမြားဟာ သီးခွားအမြိုးသားတိုငျးပွညျဖွဈတယျဆိုတာကို ဘယျတော့မှမမအေ့ပျဘူး။ReplyDeleteနေမျိုးJuly 12, 2011 at 9:53 PMတော်ကြပါတော့ဗျာ။ ဒီကိစ္စတွေဖြစ်လာတာ ကျနော်ရှက်မိပါတယ်။ တကယ်တော့ ကျနော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေက လေတကယ်ကြီးတာပါ။ အပြောဆိုလည်း ရိုင်းတာစံပြပါပဲ။ နားလည်ပေးကြပါကိုချင်းတို့ မမချင်းတို့ရေ။ ကိုချင်းတို့ မမချင်းတို့ထဲမှာ နားလည်ပေးရမဲ့သူတွေရှိသလို ကျနော်တို့ထဲမာလဲ ဒီလိုမျိုးလူတွေရှိတာမဆန်းပါဘူး။ တိုင်းရင်းသားအားလုံး လူမျိုးအားလုံးမှာရှိကြပါတယ်။ ကိုချင်းတို့ ထပ်ပြီးမပြောကြပါနဲ့တော့ သူ့တို့ဘာသာနေပါစေ။ ပြီးတော့ ကိုချင်းတို့ မမချင်းတို့လဲသိစေချင်တယ် စစ်တပ်ကိုမုန်းတာနဲ့ကို ကျနော်တို့ဗမာတမျိုးလုံးမုန်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ဗမာအများရိး သူတို့ကြောင့်ဘဝပျက်တဲ့သူတွေမနည်းပါဘူး။ အားလုံးကို အမြင်မှန်ရစေချင်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားအားလုံးကို ချစ်ပါတယ်။ ဘာသာအားလုံးကိုလေးစားပါတယ်။ နေမျိုးReplyDeletebawhteJuly 12, 2011 at 10:08 PMSorry...my Myanmar font does not work here. I agree with ကိုနေမျိုး။ Let's all stop here and forget. Let's promote love rather than hatred.ReplyDeletedavidhnangaJuly 13, 2011 at 1:20 AMOk...Let's Stop Here.... :)ReplyDeleteKhonuJuly 13, 2011 at 9:05 AMရဲလေးရဲ့ စင်ကာပူကရှိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေးတဲ့ ကော်မဲင့်တွေဟာ ဘာမှမဆိုင်တဲ့က်ေမဲင့်တွေဖြစ်ကုန်ပြီ။ဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲ...အစဒီ ဝမ်း+တူး ဆိုတဲ့စလူရေးလိုက်တဲ့ကွန်မဲ့င်က ဘာလဲဗျာ....လူမျိုးကိုပါစော်ကားတဲ့အထိ...နောက်မဆိုင်တဲ့မိန်းခလးတွေကိုပါပြောတဲ့အထိကိုဖြစ်လာတယ်..ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဒီလိုလူမျိုးကိုချီပြီးပြောနေတာလဲ... ချင်းလူမျိုးထဲက တယောက်ယောက်ကိုမကျေနပ်လို့ဆိုရင် အဲဒီတဦးတယောက်ကိုပဲ ဦးတည်ပြီးပြောပါ။ ချင်းလူမျိူးတခုလုံးကိုဦးတည်ပြီး မပြောပါနဲ့။ နောက်ချင်းမိန်းခလေးတွေကိုဆိုတဲ့စကားတွေမပြောပါနဲ့။ တကယ်တော့ မင်းက ချင်းလူမျိူး တယောက်ယောက်ကြောင့် မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်နေတာဖြစ်လိမ့်မယ်။ အဲလိုဖြစ်နေရင် အဲဒီလူကိုပဲပြောသင့်ပါတယ်။မကျေနပ်ဘူးဆိုတာက မင်းရဲ့ဗမာထဲကလဲမင်းမကျေနပ်တဲ့လူရှိနိုင်တာပဲလေ။ ဒါပေမဲ့ မင်းအဲဒီဗမာလူမျိုးတယောက်ကိုမကျေနပ်တိုင်း ဗမာတမျိုးလုံးကိုသွားဆဲနေလို့မရဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလိုမဆီမဆိုင်တဲ့ ကွန်မဲ့င်တွေရှောက်ပေးနေတာလဲ။ဒီလိုအပြောအဆိုမျိုးကိုရှောင်ရှားပြီးတော့ အဓိကကျနော်တို့ရန်သူက ဘာလဲဆိုတာ ကျနော်တို့သိဖို့ကောင်းပါတယ်။ကျနော်တို့ရန်သူက ကျနော်တို့မြန်မာပြည်ကို မတရားသဖြင့်အုပ်ချုပ်သိမ်းပိုက်နေတဲ့ ဒီစစ်တပ်၊ လက်တဆုပ်စာ စစ်အစိုးရဆိုတာသိသင့်ပါတယ်။ ဘာမှမဆိုင်တဲ့ ဒီလို တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို ပြိုကွဲစေနိုင်တဲ့ အပြောအဆိုအရေးအသားမျိုးကို မပြောသင့်ပါဘူး အဲဒီလို ကွန်မဲင့်မျိုးမပေးသင့်ဘူး။ မင်းနဲနဲဆင်ခြင်ပြီး စကားပြောဖို့ကောင်းတယ်။မင်းရဲ့အရေးအသားတွေကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မင်းမှာဘယ်လောက်အရည်အချင်းရှိတယ်ဆိုတာ သိနိုင်ပေမဲ့ ဒီကွန်မဲင့်မျိုးကိုဖတ်ခြင်းအားဖြင့်တခြားလူတွေကို မကောင်းတဲ့စိတ်ထားဖြစ်စေတာပေါ့ကွာ။ မင်းရဲ့အပြောအဆိုအရေးသားကို ဆင်ခြင်သင့်တယ်။မင်းရဲ့အပြောအဆိုက တော်တော်လေးကိုအောက်တန်းကျလွန်းပါလားကွာ။ နောက်ကို အဲလိုစကားမျိုးမပြောပါနဲ့ကွာ။ငါတို့ရဲ့ရန်သူအစစ်မှန်ဟာ ဘယ်သူလဲဆိုတာ ခွဲခွဲခြားခြားသိသင့် နားလည်သင့်တယ်လို့ငါထင်တယ်ကွာ။ReplyDeletemercyJuly 13, 2011 at 11:40 AMHay where have you guys been run away? Are you scared of chin ? Now do you see how much chin work? Later don't fire stupidly? I m so proud of being chin. And don't be so childish and jealous . If you can't get Chin, just try yourself asaman asaBurma ok? Don't makeafire with your little brain. Are you3,4or7months? Don't be so childish!ReplyDeletebo boJuly 13, 2011 at 12:08 PMThat is right.ReplyDeletelenJuly 13, 2011 at 8:34 PMFuck fuck fuck .. burma...ReplyDeletedavidhnangaJuly 13, 2011 at 10:06 PMအားလုံးတော်တော့....ထပ်ပြီးမရေးကြနဲ့ တော့....မင်းတို့ရေးတဲ့ Comment တွေကို....မင်းတို့ပြန် Delete ကြပါ...မင်းတို့ ထပ်ရေးနေမယ်ဆိုရင်... ဒီထတ်ပြဿနာကြီးသွားမယ်...ReplyDeleteMatuJuly 14, 2011 at 8:19 AMThis comment has been removed by the author.ReplyDeleteMatuJuly 14, 2011 at 8:41 AMThis comment has been removed by the author.ReplyDeleteMatuJuly 14, 2011 at 8:48 AMပင်လုံစာချုပ်တုန်းက ချင်းတိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေကို ပင်လုံဈေးမှာ ဗိုလ်ချုပ်ပြောခဲ့တဲ့ စကားတခွန်းရှိတယ် ငါလည်း ချင်းသွေး ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းပါတယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။ တက္ကသိုလ်နေ၀င်း ရေးတဲ့ စာအုပ်တအုပ်ထဲမှာရေးထားဒါ ဖတ်ဖူးတယ်။ ဖတ်ဖူးသူများ သိလိမ့်မယ်။(စာအုပ် နာမည်မေ့သွားလို့ ဖတ်ဖူးတဲ့သူဆိုရင် သိမှာပါ)။ မဟုတ်ဘဲနဲ့ နိုင်ငံတော် ခေါင်းဆောင်ကြီးက ဒီလိုမျိုး စကားပြောမယ်လို့ မထင်ပါဘူး။ ရန်ကုန်အစိုးရ လို့တောင် ခေါ်တဲ့ခေတ် ၁၉၅၀ ခုနှစ်ပတ်ဝန်းကျင်တုန်းက ကရင်လက်နက်ကိုင် လက်ထဲ မြန်မာပြည်ကြီးကျရောက်လုနီးနီးမှာ ချင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ရင်းများသာ မရှိရင် မြန်မာတပြည်လုံးအခုချိန်ထိ ကရင်လက်နက်ကိုင်များ အုပ်ချုပ်မယ် ထင်ပါတယ်။အင်းစိန် အနီးပတ်ဝန်းကျင် တိုက်ပွဲများ ကြားဖူးမှာပါ။ ချင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ရင်းမှူး ဗိုလ်မှူးကြီးဟရန်ထီယိုး ဦးဆောင်တဲ့ ချင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ရင်းသည် ဗမာ အစိုးရဘက်မှာ အသက်ကို မဓာန မထားဘဲ သစ္စာရှိရှိ တိုက်ခိုက်ပေးခဲ့တယ်။ ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မှာ ချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကို စည်းရုံးခဲ့သော်လည်း ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ချင်းလက်နက်ကိုင် တပ်ရင်းမှူးမှ စပြီး တပ်သားထိ သူရဲကောင်းတံဆိပ်များစွာ ချီးမြင့်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ မြန်မာ့စစ်တပ်တွင် အမြင့်ဆုံးသူရဲကောင်းတံဆိပ်ဖြစ်သော အောင်ဆန်းသူရိယဘွဲ့ကို ကျဆုံးပြီးသော တပ်မတော်များကိုသာ ချီးမြှင့်ခဲ့သော်လည်း ကရင်လက်နက်ကိုင်နဲ့တိုက်ပွဲတွင် အသက်ပဓာနမထားဘဲ တိုက်ခိုက်ပေးသော ဗိုလ်ကြီး သူရ တိုက်ချွန်းကို အသက်မသေပေမဲ့ အောင်ဆန်းသူရိယဘွဲ့ကို နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ ကိုယ်တိုင်မှ ပေးအပ်ချီးမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ တပ်မတော်သမိုင်းတွင် အောင်ဆန်းသူရိယဘွဲ့ကို ၇ ဦးမှ ရရှိခဲ့ရာ အောင်ဆန်းသူရိယ သူရ ဗိုလ်ကြီးတိုက်ချွန်း တစ်ဦးတည်းသာ အသက်မသေဘဲ ဆုချီးမြင့်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ လွတ်လပ်ရေးခေတ်ဦး မြန်မာ့သမိုင်း(ပြဌာန်းစာအုပ်ကို မဆိုလိုပါ)ဖတ်ဖူးသူများတော့ သိမှာပါ။ အကျဉ်းမျှသာ ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လူမျိုးစု တမျိုးနဲ့ တမျိုး ရိုင်းစိုင်းစွာ ပုတ်ခတ်ခြင်း မပြုကြရန် တောင်းပန်အပ်ပါတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်း ပုံပြင်ဖတ်ဖူးပါတယ်။ ”ချင်း နဲ့ ဗမာ ဆွေမျိုးရင်းခြာ” တဲ့ ချင်းလူမျိုးတိုင်းဟာ မြန်မာပြည်က လာဒါ မဟုတ်ပါဘူး။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုးရမ်းပြည်နယ်နှင့် မဏိပူရ်ပြည်နယ်ဟာ ချင်းလူမျိုးများရဲ့ပြည်နယ်ပါ။ အိန္ဒိနိုင်ငံတွင်းတွင် ချင်းလူမျိုး ၂ သန်းခန့် နေထိုင်ခဲ့တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ ၁ သန်း ပတ်ဝန်းကျင်သာ နေထိုင်တယ်။ အားလုံးအားလုံးသော မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးသနားပါစေ။ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားများ စည်းလုံးကြပါစေ။ အာမင်ReplyDeletedavidhnangaJuly 14, 2011 at 9:41 AMပေးသောဆုနဲပြင့်ပါစေ....ReplyDeleteတောင်ပေါ်သားJuly 15, 2011 at 3:22 AMဟေ.ကောင်..FBA 357,,,1+2.......မင်းဘယ်မှာပုန်းနေတာလဲ? စိမ်ခေါ်ရင် တိမ်ပေါ်ထိ လိုက်တယ်သိလား.ဗမာတွေဟာ တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုကို ဝါးမျိုလေ.၇ှိတာ သမိုင်းကသက်သေပါ(ပျူ သက်)လူမျိုးတွေလဲ ယနေ.မတွေ.ရတော.ဘူး.ခုလဲတိုင်းရင်းသူနဲ.အိမ်ထောင်ကျတဲ. ဗမာစစ်သားကိုလဲ တဆင်.မြင်.ရာထူးတွေပေးနေတာ ကောက်ကျစ်တဲ. နည်းဗျူဟာတွေဘဲ..မင်းတို.ခုလို အပြစ်မဲ.တဲ. တိုင်းရင်းသားတွေကို အမြစ်ပါမကျန်အောင်ရိုက်ချိုးလေလေ မြန်မာပြည်ဟာ ကမ္ဘာ.နိုင်ငံပေါင်း၂၁၃ ထဲမှာ အဆင်းရဲ.ဆုံးနဲ. တိုးတက်မှု မရှိဆုံး နံပါတ် ၂ ဖြစ်နေတာကော ဘာကြောင်.လဲသိလား..တိုင်းရင်းသားတွေရဲ. တက်ခေါက်သံ အံကြိတ်သံ ငိုကြွေးသံ တွေကို အသက်ရှင်တဲ. ထာဝရဘုရား နားညောင်းပါတယ်.. မြန်မာပြည်ဟာ သဘာဝဘေးဒါဏ်ကြောင်. နောက်ထပ် ဒုက္ခပင်လယ်ဝေပြီး ဆက်လက် ဆင်းရဲတွင်းနက်အုံးမှာ ဧကန်အမှန်ပါ..ReplyDeleteBIKAAJuly 15, 2011 at 6:35 AMDon"t be used bama word, Bama word is useless languange if you learn bama word you must poor and you cannot progress in anything,Bama media is thanshwe and fellow bama ,Fuck All bama and your UCLE thanSheReplyDeleteppJuly 15, 2011 at 8:28 AMwhat the fucking profit can you get from the mother fucking Myanmar.you guys think first, then post the comment.for me, I hate mother fucking Myanmar. you all guys are the same too.that's why, you guys run away from the mother fucking country. :DReplyDeletecoconutJuly 15, 2011 at 1:15 PMwe are the world, we are the children,we are the ones who makeabrighter day, so let's start giving!ReplyDeletebawhteJuly 16, 2011 at 1:07 PMအားလုံးကို တျော ကွပါလို့ တောငျးပနျလိုပါတယျ။ ပွမေယျဆိုရငျလညျး ဆဲဆိုတဲ့ စကားတှကေို ရှောငျကွရငျ ကောငျးမယျထငျတယျ။ ပွောခငျြတာတှကေုနျအောငျပွောမယျဆိုရငျ ပွီးနိုငျတော့မှာမဟုတျဘူး။ အားလုံးအတှကျ အမှနျတရား နဲ့ သမိုငျးအထောကျအထားတှေ နားလညျနိုငျအောငျ အမွငျမှနျဖှငျ့ပေးနိုငျမယျ့စကားတှကေို ပိုပွီးသုံးစှဲကွရငျ ကောငျးမယျထငျတယျ။ReplyDeletecoconutJuly 17, 2011 at 1:16 AMhey bawhte Bar sakar tway na' yay nay dar tone !! Thi chin like dar!!ReplyDeleteChin The ConquerorJuly 17, 2011 at 11:59 AMWell it is really funny that how Burmese become as crazy asadonkey,may be their father Than Swe doesn't feed them sufficiently. Thus they started to bark at the noble Chin so that they may get some food from us. Actually we should help them and feed them cause the proverb said "a full dog never bark" they need knowledge and provision. We Chin people love each other but they are eating themselves, it is really pitiful. I think I have to remind Burmese what they forefather said, မပြည့်သောအိုး ဘောင်ဘင်ခတ်၏, and ပုဆိုးခြုံထဲက လက်သီးပြ. What idiot people they are but we are lucky to see those crazy people in our lives, I think it will not be an easy think to discover around the world, in the entire human species. Let's writeabout them and publish and sell all over the world, Who can say we may getaNoble prize for discovering suchascarce human species, which can only be found in Myanmar. Please note that we Kachin, Kayar, Kayin, Chin, and Mom are really united and we are the most noble people in Myanmar cause we do not eat and kill ourselves. Well I think I should stop here cause if we continuously reply them we may somehow make them to be wise. Let's protect our knowledge recourse for our generation from these idiot people. Finally I would really like all ethnic to have mercy on Burma, cause they have never learn history at school but only the story of their bully Than Swhe. May God have mercy on Burma.ReplyDeletemercyJuly 17, 2011 at 1:31 PMMercy? that's my name ! I don't wanna be on Burma. hahaha! I m the one who is so proud of being Chin! May the good God be with Chin forever and ever! Amen!ReplyDeletebawhteJuly 17, 2011 at 2:16 PMHi coconut...I was just writingarequest to stop posting scolding languages here. I was frustrated it showed funny on the net. Yea...that was one reason we Chins use Roman alphabets at the beginning and I think it wasaclever move. Could you imagine you use Burmese alphabets for Chin languages? That would have been utmost disastrous for pronunciation and all the Chin linguistic essence would have been changed intoakah-pia sound. For example, "THANTLANG" is spelled in Burmese as "HTAN-TA-LAN", "TEDDIM" as "Tee-Ting". How pathetic our names become when spelled in Burmese language!!! The only compelling truth all it proves is that you get nothing special out of it (Burma).ReplyDeleteZaw ZawJuly 18, 2011 at 6:59 AMင်္ToMr. FBA357Even thought I amaBurmese. I know the reality and the weakness of Burmese. Chin believed in the living God, Lord Jesus Christ. but, we, Burmese worship the person like us. I want to encourage to all Burmese is try to seek the living God and forsake man-god.ReplyDeleteZaw ZawJuly 18, 2011 at 7:32 AMDear 1 +2= 12 ငါတို့ ဗမာစစ်တပ်က တိုင်းရင်းသားတွေကို နှိပ်စက်။ မုဒိန်းကျင့်၊ သတ်ပစ်နေတဲ့ကြားက အခု မင်းဒီလိုမလုပ်နဲ့ လေကွာ။ ငါတို့ ပြည်သူတွေ စည်းလုံးလို့ ရှိရင် လူမျိုးကြီးဝါဒတောင်မှ ချုပ်ငြိမ်းသွားနိုင်တယ်။ စိတ်လျော့နော် သူငယ်ချင်းReplyDeleteZaw ZawJuly 19, 2011 at 2:29 AMငါတို့ ဗမာတွေက ရောက်လေရာအရပ်မှာ ဒေသခံလို နေထိုင်တတ်တယ်လေ။ မီဇိုရမ်ရောက်ရင် ဒေသခံတွေနဲ့ အဆင်ပြေအောင် ခရစ်ယာန်ဘာသာထဲ ၀င်ရတာပါ။ မင်းတို့ ချင်းတွေလည်း အာရပ်နိုင်ငံတွေ ရောက်ရင် ဗလီမှာ ၀တ်ပြုဖို့ ဝင်မလေးကြပါနဲ့ ။ အညာသားကိုဇော်ဇော်ReplyDeletedavidhnangaJuly 19, 2011 at 7:15 AMTo Zaw Zaw မင်းဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲ....ReplyDeletemercyJuly 19, 2011 at 11:20 AMHay Zaw Zaw are you cold or are you hot? Be asure! You don't know even yourself. Then why do you say what Chin have to do. We all are Christian.We know ourself. Not like you who is living depending on the situation! Ok? Go your way! But Don't tell to Chin like that.ReplyDeleteZaw ZawJuly 19, 2011 at 10:41 PMToMercyHot or cold is not your business. what i mean is we have to live as the current situation. "yawmah yawk yawmah lo kyint" means following into the current situation. if you are chin patroitic, why not you contribute to chin revolution movement? I am waiting for your reply. Zaw ZawReplyDeleteZaw ZawJuly 19, 2011 at 10:48 PMညီမလေးမာစီအတွက်မာစီဆိုတာ အင်္ဂလိပ်လို သနားကမားစရာကောင်းသော သူကို ဆိုလိုသည်အထူးသဖြင့်ချူခြာသောသူကို ကိုယ်စားပြုသည်ReplyDeletemercyJuly 20, 2011 at 2:23 AMto Zaw ZawYeah you are not cold you are not hot . You are half. Ok That's not my business. You don't have yourlife style yah that's not my business. Why I don't contribute to Chin revolution movenment? Then that's not your business either. GO your way as you like . If you are among in thief then beathief . If you are among in good person then beagood person. Yout don't have your own dicison . Ok then that's not my business.May be I contribute to Chin revolution movement. Then that's not your business either.ReplyDeletecoconutJuly 20, 2011 at 10:17 AMhi bawthte, Are you Chin ? Ka thei zoh. Thank you for your explanation.ReplyDeletebawhteJuly 20, 2011 at 10:06 PMHi Mercy...I just want to put some corrections on what you said about all Chins being Christians. It is not true. We Chins are not all Christians. There are many Chin Buddhists out there in the south in Arakan states. But we all live in harmony and respect. I suggest we all need to be very careful about what we want to say. When we talk about politics and social issues, it is out of religion. Most of the time, faith / religion will not fix the current Burma political problems. The problem in Burma is that Bama peoples always impose their religion agenda into politics along with their racial exertion. In other words, majority Bama peoples do not comprehend what is politics and what is religion and how they should coordinate for peace of the country. If you can find an open-minded Bama politician in modern history, that would be extraordinarily outstanding. I could not imagine when Suu Kyi dies, whoatrustworthy politician from Bama peoples will be. This is how they behave - they see but they do not believe; they believe but they do not do as they believe. Could you realize we are living in the mercy of this kind of peoples? It was true that Aung San was extraordinary man among Bama. But after Aung San was assassinated, there was no single politician among Bama peoples who has an open-mined thinking and fair resolution for the union like him. The next Prime Minister U-Nu was an opposite to Aung San. He wasacunning and nasty as exactly as his look. He imposed Buddhism as the country national religion. Even until now, Religion Ministry is specially designed for Buddhism propagation in the country. The sad thing is that, Suu Kyi is still not understood by her peoples either. She will just diminish like his father without the appreciation of her peoples. When Bama peoples say they understand democracy, it really is not. It simply means they want to. What I'm trying to say is the majority of Bama peoples do not really understand what is democracy. It is not because they can't but because they don't want. And that'sabig problem for those ethnic peoples becausealarger scale of Burma population (37 million) belongs to Bama and only about 15 million belongs to ethnic peoples collectively. Another saddening problem here comes again since the total number of Bama peoples who really understand and want democracy is less than 100,000 out of 37 millions. Could you guys picture what is going on with our country now? So here is the question? Will Bama majority peoples be able to practice democracy in the near future? The answer is NO. They will take many decade or even centuries for them to bring genuine democracy in their politics. More or less, they will still rely on their military might, Burmanization policy and religion agenda. Who is going to educate or enlighten them about this? I won't know. You see - Suu Kyi will not live much long as there is no Bama who can replace her position. So it isadisaster, isn't it? They will forget whatever Aung San and Suu Kyi has shown them and lectured them. They will do as exactly as their former leaders did. If you are in Bama military, you will what I mean here. We Chins cannot get into army high rank because we are Chins and Christians. You see - the policy of Bama military is that all states are Bama colonial regions. Bama has to be the rulers and at the top for ever in order to bring peace in the country. Isn't ridiculous? I have studied Bama military from ex-Bama soldiers and they are petrified to find that the whole idea about Bama military is to uphold the safety of Bama nationalistic dominance policy over all other ethnic peoples. Believe it or not, you are in hell my friends. To be continued...ReplyDeletedavidhnangaJuly 21, 2011 at 11:39 AMYep... That's right...Bawhte To>>Mercy...You Can't Say.. We CHIN Are All ChristianReplyDeletemercyJuly 22, 2011 at 1:45 AMYeah i was wrong that i said we all Chin are Christian. What i wanted to say to Zaw Zaw is we should know what we worship. The relagion can make our mind and our chracters and our behaviors change and dicide where we will go after next life. We need to know what we worship and what we believe definately . That was what i mean. And the words i said was wrong . You are absolutely right that i needed to say carefully what i want to mean. I was so rushed cos i love Chin alot.ReplyDeleteRe ManJuly 22, 2011 at 10:21 PMplz all friends,I am Moe Aung living in Chin state since I was young, now also among chin community in USA. I do not want to beajudge over your argument.fine chin are Good . Burman are also good.a wonderful thing is that there is at leastaprostitute ,atheft ,abeggar,agigsy, andawitch even inasmall burman village. you burman had said that you can fuck chin lady with out wages. right some how, I agree. but Cannot do all chin ladies. we burmans belong to prostitute and beggar community. when i was in chin land, there was5beggars in our town, hakha all are burmans. it is shameful.i can not believe in and trust any burmese political leader except Aung san's generation since they are half chin. i love chin peolpe.they are uplifted by God though are neglected by burman government. Chin are heavenly being while burmans are internationally looked down person. MOe AungNYReplyDeleteRe ManJuly 22, 2011 at 10:29 PMhi,my fellow Burmans,why government protects Buddhism?why government rapes Chin Ladies?why government kills Chin potential leaders?why government allows the country Pulled apart?why burmans are happy when chin are being tortured?government+ beggars= dog communityI hate burmanization . let them survive.God and international are with Chin.Moe AungUSAReplyDeleteတောင်ပေါ်သားJuly 23, 2011 at 1:04 PMZAWZAW....ရောမရောက်ရင် ရောမလိုကျင်.ရမယ် ဆိုတာ လူမှုရေးကို ပြောတာဘာသာရေးနဲ. လုံးဝမဆိုင်ဘူး..မယုံကြည်ဘဲ မီဇိုရမ်ရောက်တာနဲ.ခရစ်ယာန်ထဲ ဝင်စရာမလိုသလို- ကျွန်တော်တို.လည်း ဘယ်လူမျိုးနဲ.နေနေဘယ်နိုင်ငံရောက်ရောက် အသက်ရှင်တဲ. ထာဝရဘုရားကလွဲရင် လုံးဝ(လုံးဝ) ကိုးကွယ်စရာ အကြောင်းမရှိဘူး...ReplyDeletemercyJuly 24, 2011 at 4:46 AMTHat's right.ReplyDeletebualdawhJuly 24, 2011 at 7:28 PMဟေ့ FBA357 နင့် comment မှာကျတော့ Burma ကို အရမ်းချစ်ပြီး လေးစား မယ့်လူတစ်ယောက်လိုပါလား။တစ်ကယ်ကျတော့ ကိုယ့်ဗမာ စာရှိရက်သား နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ စာ စာကလုံးတွေ တောင်မှမသုံးချင်တဲ့ဟာ ကိုး..ရှက်ဖုိ့ကောင်းလိုက်တာ။ English စကားကို အရမ်းအထင်ကြီးတယ်မလား။ ပြီးတော့ တစ်ယောက် ၂ယောက်ချင်းတွေ စကားပြောမှားတာကို ချင်းလူမျိူးတွေ အားလုံးမထိခိုက်ပါနဲ့။ပြောရရင် တစ်ချိူးဗမာတွေ ကလမ်းဘေးနားမှာထိုင်နေပြီးသတောင်းစားအလုပ် ကိုလုပ်ပြီးမှအစားအသောက်ရှာနေကြတယ်မလား။ချင်းလူမျိူးတွေသတောင်းစားခံဖူးမယ့််လူတစ်ယောက်မှ အခုထိမတွေသေးဘူး။တစ်ကယ်လို့ တစ်ချိူးဗမာလူမျိူးတွေကြောင့် ဗမာလူမျိူးသတောင်းစားတွေလို့ ပြောခဲ့ရရင်ရော့။နင်မခံစားရဘူးလား။မျိူးချစ်စိတ်ရှိတယ်မလား။ဒါကြောင့်မို့စကားပြောတာဆင်ခြင်ပါ။NwayNway နင့်လိုအောက်တန်းကျတဲ့ စိတ်ဓါတ်ရှိမယ့်သူက ဘယ်တော့ဘယ်ခါမှ အဆင့်မြင့်လူကြီးဖြစ်နိူင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့လဲ့မဖြစ်ခဲ့တာ သိလား။ ထားလိုက်ပါတော့ ချင်းလူမျိူးကို ဦးဆောင်ဖို့ကတော့ နင့်ရဲ့ တစ်သက်မှာစဉ်းစားဖို့ မကြိူးစားနဲ့ နောင်းနောင်လည်းဖြစ်နိူင်မှာမဟုတ်ပါ။ဒါကြောင့် အခုကတည်းကနေ နင့်ရဲ့အောက်တန်းကျတဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို မေ့ပစ်လိုက်ပါ။နင်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေ နင့်တို့အပေါာ ပြန်မရောက်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပေးနေမယ်။ReplyDeleteRaymond Thang Kam MangJuly 25, 2011 at 9:22 PMအရင်က.....ရေခဲထုပ်ရောင်းတဲ့ ဘ၀ကိုပြန်မရောက်ချင်တဲ့......ရဲလေးတစ်ယောက် လုပ်ရပ်နဲ့...ဒီလောက်ထိကြီးကျယ်သွားတယ်ဆိုတော့.....ဘာဘဲပြောပြော.....ငါတို့ မြန်မာနိူင်ငံသားအားလုးံ ကိုယ်နဲ့တန်ရာတန်ရာအစိုးရကအုပ်ချုပ်နေတာပေါ့.....ဘာမဟုတ်တဲ့လူတောတစ်ရာအုပ်ထဲ ခေါင်းဆောင်ကောင်းလဲမလိုလားကြတော့.....သေနပ်ထမ်းတဲ့လူတွေကိုဘဲကြောက်တဲ့ လူတွေအတွက်.....သေနပ်ခါးကြားထိုးတဲ့ အစိုးရနဲ့ဘဲတန်တယ်.....ReplyDeletekwchinJuly 26, 2011 at 10:13 AMI don't think civilized people will take note on this smearing online onslaught between Chin and Burmese since most of both side writers are none other than online pranksters.Burma isabeautiful multicultural nation where the genuine federal union will be built soon. All the vandals online who shot each other with racist remarks don't know that they attack each other asaresult of being lawlessness for more than 20 years under military regime.Due to lack of proper education for two decades under military rule in Burma, young people nowaday often lock themselves against each other with useless debate which only infuriate them but not develop them to take lesson. Especially Burmse young people born after 1988 should be better educated since they were born during the darkest generation of Burmese political history.Ifafather have seven sons and seven daughters, he can not name them all the same but give them different names respectively since they are all the children of the father. Being Chin, Kachin, Rakhine, Karen, Shan etc, is just different names given if the Father isaGenuine Federal Union of Burma. USA have 50 states and some are Texan,Californian, Newyorkers etc but they are all one in United States of America (USA).Have Fun!Salai Lairam.ReplyDeleteI Dont have to Love my enimiesJuly 26, 2011 at 7:24 PMI will save all these comments forever.. from all these comments.. I can see that Burmese are my enimies...I never knew that they are such dangerous enimies to to we the Chin poeple.. now we knew who are our biggest enimies in this World...I feel like my heart is broken when I finally see that my closest neighbours someone who I observed as my own brother is becoming my biggest enimies.. someone who betrayed me at Panlong agreement.. someone who is to prapareatable for me but lock me down behind the bar...Someone who invites me to taste peace together but taking me likealamd toaslaughter..My God, and my Lord, you knew it? Our Land is the land that where you leaded me.. It is your City and its in your own Hand forever...We all pray in Jesus NameReplyDeletezingdapJuly 26, 2011 at 8:25 PMGuys, the sooner we get out of Union of Burma, the better we will be. There is no need to fool ourselves. And there is no need to mislead ourselves about the nature of Burma. Let's live separately, side by side and in peace. The very idea of uniting with Bamaland is onlyasign of weakness, laziness, fear, immaturity, cowardice and backwardness.The more you are in multicultural society, the more you have problems. And there is nothing great nor beautiful about Myanmar as far as I can see. Great peoples makeacountry great, not the natural resources nor landscapes. Natural resources can deplete. It is great only when you know how to make use of them and find them. Landscapes are useless when you are in poverty. Culture isaway of life only. When you think your culture is beautiful, it is simply means for you. The truth is there are many cultures out there which make the peoples duller, more selfish, less intuitive for progress. Our country will be great only if its peoples have great thinking, great attitude, great heart, great brain, great philosophy, great beliefs and so on. Then you now know what makes our country shitty. Stop fooling yourselves! Be honest, and start learning to see the facts!ReplyDeleteestherthaJuly 26, 2011 at 10:00 PMI m Chin,i m very proud of to be Chin &christian.We are poor cause of Burma thats right,But we still have good hearts which is from our God,we love u Burma,we encourage u Burma to protect more your country(or)people,and we pray for u Burma.Haveapeace !!! I Love Chin <3ReplyDeletemosesJuly 27, 2011 at 12:59 AMခွေးဗမာများသို့ အသိပေးခြင်းဆုန်သင်းပါ၇်က ချင်းလူမျိုးတခုလုံးကို ကိုယ်စားပြုမှုမရှိပါဘူး။ မင်းတို့ ဗမာတွေဟာ လူမျိုးမစစ်တဲ့ကောင်တွေ။ မျိုးမစစ်ရင် ကတိမတည်ဘူး။ အလယ်အလတ်ကောင်တွေဘဲ။ ခြံစည်းရိုးနှခွ၇ပ်တဲ့လူမျိုးတွေ။ သွေးစည်းညီညွတ်မှုလုံးဝမရှိတဲ့လူမျိုးတွေ။ ချင်းတွေဟာ ဒီနေ့ မင်းတို့ ဗမာကောင်တွေရဲ့ ဆရာကြီးဖြစ်နေပြီ။ ဗုံလုံတလှည့်ငါးဖျံတလှည့် ဆိုတာဖြစ်နေပြီ။ ကျွန်ခံဖို့ သာ ပြင်ကြပေတော့။ ငါတို့ ဗမာတွေကို သိပ်ကလည့်စားချေချင်နေပြီ။ သတိသာထားပေတော့။ReplyDeleteမျိုးချစ်(Chinland)July 27, 2011 at 2:13 PMFBA357.++++(အစဉ်အလာအရ မြန်မာတွေအောက် ကျွန်ခံလာပြီးမှ ထမင်းဝလို့လူပါးဝနေပြီလား)ဘယ်တုန်းက မင်းတို.ဗမာတွေအောက်ကျွန်ခံဘူးလဲ.မြန်မာပြည်မှာဘဲ မီးများမီးနိုင် ရေများရေနိုင်ဆိုသလို မင်းတို.ဗမာတွေကငါတို.ကို အနိုင်ကျှင်.လို.ရချင်ရမယ်. နိုင်ငံတကာရောက် ချင်းလူမျိုးတွေ၇ဲ.ခြေဖဝါးအောက်မှာ မင်းတို.ပြားပြားဝပ်ဘို.သာပြင်ပေတော....ကြိုက်တာနဲ.လာယှဉ်ပါ.မင်းတို.လို ဥာဏ်နီ ဥာဏ်နက် ဒို.မှာမရှိဘူး...အကူညီလိုရင် အချိန်မရွေးကူညီဘို.အစဉ်သင်.ပါ..စိမ်ခေါ်ရင် တိမ်ပေါ်ထိလိုက်တယ်.ခွေးသူရဲဘောကြောင်သလိုတော လာ မဟောင်ပါနဲ.....မြဲမြဲမှတ်ထား...ReplyDeletedavidhnangaAugust 1, 2011 at 8:58 PMthat's right....ReplyDeletedavidhnangaAugust 1, 2011 at 9:00 PMငါတို့ ချင်းလူမျိုးတွေဘယ်တော့မှ..ဗမာလူမျိူးအောက်မှာ.... ကျွန်မခံဘူးဆိုတာ....မြဲမြဲမှတ်းတမ်း.... >>>FBA357ReplyDeletedavidhnangaAugust 1, 2011 at 9:03 PMTo >>>FBA357မသာ.... FBA375 ... မင်း Comment လေးတွေကိုငါမြင်ချင်တယ်...ထပ် Comment ပါဦး... သူတောင်းစားလေရယ်....ReplyDeleteChin The ConquerorAugust 2, 2011 at 10:57 AMI am Chin, I don't think we should not oppose all Burmese because of some bustard Burmese. For me I believe Burmese who against and oppose Chin are basically the people of နအဖ but not the true and the real citizen who we used to know our brothers and sisters in our precious country, land. Let us not take note about what they write and what they said to us, but let's pray for them as we are the sons and daughters of The Living God, who loves all nation and all people on earth. Jesus did not die just for Chin but He also died for Burmese. We all are brothers and sister in Christ and we are even one in Jesus. For We Chin, Christian the bible also teaches us in Roman 12:21"Be not overcome of evil, but overcome evil with good." To respond evil by evil is not the way to overcome conflict but only by good deeds.. May you all be blessed bountifully by God and let His mighty peace be with you all..ReplyDeleteMatuOctober 3, 2011 at 5:36 AMhttp://vimeo.com/29891714ReplyDeleteminmin tunMay 9, 2012 at 1:24 AMဒါမှ ဒို့မြန်မာ အမျိူးထိရင်ဆက်ဆက်ခါ အောင်နာတယ်ဟေ့ မြန်မာ ကိုချစ်သူတိုင်း ကြက်ဝိုင်းကြိုက် သူတိုင်း အစအဆုံး ဖတ်မိမှာသေချာတယ် ကျွန်တော်အတွက်တော့ ဗဟုသုတ ရတယ် ရယ်ရတယ်. လူတွေဟာ ဟိုးတုန်းကလူတွေ နံ့ အခုလူတွေ နဲ့ အတူတူပဲတဲ့ တကယ်ဟုတ်တယ်နော် အားလုံး က မနောစိတ် ကိုပိုင်ဆိုင်ထား ကြတာကိုး . လူအုပ်စု တစုကို မတည့်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ချစ်သွားအောင်ညီညွတ်သွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ နည်းလမ်းတွေရိတယ် (ငယ်ငယ်တုန်းက လို အတန်းထဲမှာ အာဝါးပေးခိုင်းလို့တော့မရဘူးဗျ) ဥပမာဗျာ အုပ်စု ၁စု ကွဲချင် ရင် ပြိုင်ပွဲလေးတခုလုပ်ပေးလိုက် yatanapon united Vs Yangon united ပေါ့ အားလုံး အားလုံး အားလုံး ကွဲပြဲကုန်ရောပဲ or ခုလို အနာဟောင်းတခု ငြင်းစရာလေး တစ်ပိုဒ် လောက်စာဖွဲ့ပေးလိုက် အမလေးနော် လူသားမျိုးသုန်းသွားနိုင် တယ် ချစ်ချင်လား ရတယ် နှစ်ဦးစလုံး အခက်ကြုံအောင် ၁ခုဖန်တီး အတူတူဖြေရှင်းခိုင်းလိုက် ခွဲလို့တောင်ရမှာမဟုတ်ဘူး ,, ကျောင်းသားဘ၀ လေ အမှတ် ၁ နဲ့ အမှတ်၉ ၁၃ ကအဆစ် ပါလိုက်သေး တွေ့တဲ့နေရာမှာ ဖုတ်ကြတာလေ ရတနာပုံ လည်းရောက်ရော မေဂျာကလည်းတူ ဆိုတော့ ချစ်လိုက်တာမှပြောမနေနဲ့ ရတနာပုံထိ ဓါးကြည့်ပေါ့ ဖြစ်သွားပြန်ရော စိတ်ဆိုတာ မကောင်းမူမှာ ပျော်တတ်တာ ဓမတာ ကဲကဲ အားလုံးပဲ လွတ်အောင်ရုန်းနိုင် ကြပါစေ တတ်ထားသော ပညာတွေကောင်းသောနေရာမှာ သုံးနိုင်ကြစေသတည်း အခုလိုဆရာကြီးလုပ်ရမှ ကျေနပ်အိပ်ပျော်တဲ့ အမျိုးစားထဲကပါ အားပေးမူကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ReplyDeleteAdd commentLoad more...